October 2015 | ကမ်းလက်
ဆုတောင်းပေးသူတွေကို ကျေး ဇူးတင်ပါတယ်
in ဇင်ဝေသော်, အမှတ်တရ - on 10/29/2015 - No comments
မနေ့ညက မနေခြည် လာကပ်သွားတဲ့ မွေးနေ့အကြို ဘုရားပန်း။
အရောင် သုံးမျိုး။ ဘာအဓိပ္ပါယ်လည်း ပြောနိုင်ကြသလား။
October 28 at 4:51pm
မနေ့က အွန်လိုင်း၊ တိုင်းမလိုင်းပေါ်မှာ မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးသူ ၈၀
ဖုန်းမက်ဆေ့၊ ကွန်မင့်နဲ့ ဆုတောင်းပေးသူ
လူမသိ၊ စာမရေး၊ အသံမထွက် ဆိုင်းလင့် ဆုတောင်းပေးသူတွေကို ကျေး ဇူးတင်ပါတယ်။
ဒါနဲ့ အိုင်ပက်မီနီက ကင်မရာမကောင်းဘူး၊ မကြည်ဘူးဆိုပြီး မသုံးဖြစ်ခဲ့ ပါ။ ကောင်မလေးတစ်ယောက်က မဖြစ်နိုင်တာ၊ ကင်မရာမှာ ပေပွနေ တာတွေ ရှိလို့နေမှာဆိုပြီး တစ်ရှူးနဲ့ သုပ်လိုက်တော့ အိုင်ပက်မီနီ ကင်မရာ က အတော်ကောင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ ကွမ်းစားထုံး အနည်းငယ် ပေနေတာမျိုးလောက်ပါ။
ဒီအပြင် ဓာတ်ပုံရိုက်၊ မလိုတဲ့အပိုင်းတွေကို ဖြတ်ပစ်လို့ရမှန်း သိလိုက်ရ ပါတယ်။ အခု ဦးရွှေမန်းပုံက အဲ့ နည်းပညာအတိုင်း ဖန်တီးထားတာပါ။ သူ့ကိုလည်း ကျေးဇူးပါ။
October 29 at 4:49pm
in ဇင်ဝေသော်, အမှတ်တရ - on 10/28/2015 - No comments
လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးနှစ်က ဥက္ကဌက ပြောတယ် "အရင်ဘန္တေ လက်ထက်ကလို မွေးနေ့နဲ့ အနီးဆုံးတနင်္ဂနွေမှာ မွေးနေ့အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး ကျောင်းကော်မတီက မွေးနေ့ ကျင်းပပေးရင် မကောင်းဘူးလား"
"ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မလိုတော့ပါဘူးဗျာ၊ မွေးတောင်မွေးခဲ့ပြီးပြီပဲ၊ တခြားဟာတွေ လုပ်ရအောင်ပါ" သူ ဘာမှ ထပ်မပြောတော့ဘူး။
နန်းရင်ပြင်က အလှပြ ကျောက်စီဓား တစ်လက် ဖြစ်ဖို့ထက်
သစ်ခုတ်သမား လက်ထဲက ဓားမတို တစ်ချောင်း
အိမ်ရှင်မလက်ထဲက ကြက်သွန်လှီးဓား တစ်လက်
အားပေး လမ်းညွှန်တော်မူပါ အရှင်ဘုရား။
in ဇင်ဝေသော်, သီဟနာဒ, အမှတ်တရ - on 10/28/2015 - No comments
ဘဝခရီးအတွက် အမောခဏဖြေရင်း အဖေ့ကျေးဇူးကို ခပ်ဖွဖွနမ်းရှိုက်မိပါတယ်။ ဒီစာဟာ ကိုယ်ရည်သွေးမဟုတ်တဲ့ အဖေရည်သွေး မှတ်တမ်းတိုတစ်ပုဒ်ပါ။
"မင်းဆရာ ဦးမြအောင်နဲ့တွေ့တော့ မင်းကို ကျောင်းဆက်ထား၊ မထားမေးနေသေးတယ်ကွ၊ မထားနိုင်ဘူးဆိုတော့ သူလည်း စိတ်မကောင်းရှာ ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ငါကြားရတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်က မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီးက ရန်ကုန်နဲ့ မန္တလေးမှာ သာသနာ့တက္ကသိုလ် ကြီးတွေ တည်ထောင်ဖို့လုပ်နေတယ်တဲ့ကွ။ ဓမ္မာစရိယပြီးရင် အဲဒီတက္ကသိုလ်ကြီးတွေကို တက်လို့ရမယ်။ မင်း ကိုရင်ဝတ်၊ ဓမ္မာစရိယပြီးအောင် အမြန်လုပ်ပြီး အဲဒီ့ တက္ကသိုလ်ကြီးတွေ တက်နိုင်အောင် ကြိုးစားပေါ့။ အဖေတို့က လူတက္ကသိုလ် မပို့နိုင်တောင် ဘုန်းကြီးတက္ကသိုလ် တက်နိုင်အောင်တော့ ထောက်ပံ့ပေးနိုင်မှာပါ။ သာသနာ့တက္ကသိုလ်တက်ရရင် လူတက္ကသိုလ်ထက်တောင် ကောင်းသေးတယ်။ မင်း ကိုရင် ဝတ်မလား"
"ဒါဆို တောင်သူက ဘယ်သူ ဦးစီးလုပ်မှာလဲ"
"မပူပါနဲ့ကွာ၊ မင်းအမတွေ၊ ယောက်ဖတွေလည်းရှိနေတာပဲ"
"သားမက်က သားတော့မဟုတ်ဘူးနော် အဖေ"
"အဖေလည်း လုပ်နိုင်ပါသေးတယ်၊ မင်းဘာသာ မင်း စဉ်းစား။ ကိုရင် ဝတ်မယ် ဆိုရင် ဒီဝါဆိုအမီ ဘူးကိုင်းဘုန်းကြီး(မြောင်နယ်၊ ဘူးကိုင်းရွာ၊ ဗောဓိကျောင်း)ဆီ ငါလိုက်ပိုပေးမယ်။
ဒီလိုနဲ့ သံသာရ ဝဋ္ဋဒုက္ခတောဆိုတာ ဘာမှန်းမသိ၊ သီဟနာဒဖြစ်လာမည့် ၁၆ နှစ်သားလူငယ်သည် ဓမ္မာစရိယအောင်မြင်ရေး၊ သာသနာ့တက္ကသိုလ် တက်ရောက်ရေးအတွက် ထွန်တုံးပေါ်မှဆင်းကာ ဝါဆိုလပြည့် ည ကိုးနာရီမှာ သာမဏေတစ်ပါးဖြစ်သွားတော့သည်။
အရာခပ်သိမ်းပြောင်းလဲသွားသည်က ရဟန်းတစ်ဝါအရမှာ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုစဉ် မန္တလေးမြို့၊ မိုးကောင်းတိုက်၊ ဒေးဝန်းဆရာတော်ကြီးထံ ရောက်ရှိနေပါပြီ၊ ဓမ္မာစရိယ သုံးကျမ်းစလုံး အပြီး၊ အနည်းဆုံး နှစ်ကျမ်းတော့ပြီးမယ်လို့ ထင် ထားခဲ့သော်လည်း ပါရာဇိကဏ် တစ်ကျမ်းသာအောင်ခဲ့သည်။ သို့သော် အခက်ဆုံးလို့ယူဆရသည့် ပါရာဇိကဏ်ပြီးသွားသည့်အတွက် ကျန်နှစ်ကျမ်းက သက်တောင့်သက်သာပြီးနိုင်သည့်သဘော ရှိသွားခဲ့သည်။ ထိုအခါ တိပိဋက ဓရ ရွေးချယ်ရေး ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည့် ဒေးဝန်းဆရာတော်ကြီးက ဝါတွင်းမှာ နိကာယ်ကျက်ဖို့ ဩဝါဒချွေလာသဖြင့် ပါရာဇိကဏ်ပါဠိတော်ကိုကျက်၊ မနက်တိုင်း ဆရာတော်ကြီးဆီ စာပြန်ရပါသည်။
တကယ့် ပါဠိတော်ကြီးတွေကိုကျက်မှ မိမိဉာဏ် မစွံလှကြောင်း သိရသည်။ ထိုစဉ် စစ်ကိုင်း၊ သုဗောဓာရုံနေ(ယခု ပါချုပ်ဆရာတော် ဒေါက်တာနန္ဒမာလာဘိဝံသ၏ မိခင်တပ်ရင်းကျောင်းတိုက်) သူငယ်ချင်းက တစ်နေ့ကို စာမျက်နှာ ၂၀ ခန့် ကျက်နိုင်သည်။ မိမိဉာဏ်က တစ်နေ့ ၁၀ မျက်နှာမျှသာရှိသည်။ သို့သော် ဆရာတော်ကြီးက ကျေနပ်ပါသည်။ ၂ လဆိုရင် ပါရာဇိကဏ်ကုန်မယ်၊ နောက်နှစ် လ ပါစိတ်ကိုဆက်ကျက်၊ ဥဘတောဝိဘင်း ဝင်ပြန်၊ သုံးလလောက်အလိုမှာ ဓမ္မာစရိယပြန်ကိုင်ဖို့ အချိန် အကြမ်းဆွဲပေးသည်။
ပါရာဇိကဏ် ကျက်လို့ ကုန်ခါနီးမှာ မမျှော်လင့်ဘဲ အဖေဆုံးပါးသွားခဲ့ရပါသည်။ တစ်နေရာဆီမို့ အဖေ့ဆီက နောက်ဆုံး အမှာစကားလည်း မကြားလိုက်ရပါ။ ထို့ကြောင့် အဖေ့ ဈာပနအပြီး တစ်ချိန်ကအဖေဖြစ်စေချင်သည့် သာသနာ့ တက္ကသိုလ်ကို တက်ဖို့ပဲ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါသည်။ တက္ကသိုလ်ပညာရေးကို အထင်မကြီးသည့် ဆရာတော်ကြီးက အကြီးအကျယ်ဆူပါသည်။ သို့သော် အဖေ့ရည်ရွယ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းလိုတာရယ်(ဆရာတော်ကြီးမှာ အခြား တပည့်တွေရှိသော်လည်း ဒီ အဖေကတော့ ဒီသားတစ်ယောက်သာ ရှိသည့် အတွက် အဖေ့ဖက်ကို ရွေးခဲ့ပါသည်)၊ ထိုစဉ် ဓမ္မာစရိယပြီးရန်မလို အကြီးတန်းပြီးရင်ဘဲ တက္ကသိုလ်တက်လို့ရတာရယ်ကြောင့် ထိုနှစ် သတင်းကျွတ်တာနဲ့ တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ဖြေလိုက်ပါတော့သည်။
နေခဲ့တော ပါရာဇိကဏ်၊ ပါစိတ်။ ပြေးဖက်လိုက်သည့် အေ၊ ဘီ၊ စီ။
"မင်း သာသနာ့တက္ကသိုလ်ထဲရောက်သွားရင် ငါတို့ သင်မပေးလိုက်နိုင်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စာတွေ သင်ရမှာ၊ အင်္ဂလိပ်စာ တတ်သင့်တယ်ကွ"
အတတ်ကြီးမဟုတ်သေးပေမဲ့(ဘယ်တော့မှလည်း တတ်မှာမဟုတ်) အဖေ့ရဲ့ လမ်းပြမြေပုံအတိုင်းလိုက်နေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အသိ။
သာမန်ထက်လုံးဝ မပိုတဲ့ သားတစ်ယောက်ဟာ ခေါင်းပေါင်းစဖြူဖြူနဲ့ သူ့အဖေရဲ့ လမ်းပြမှုမရှိဘဲ ဘာမှဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သေချာလွန်းလို့ ရောက် တဲနေရာမှာ ခဏရပ်။
အဖေ့ကျေးဇူးကို ခပ်ဖွဖွ ပြေးဖက်ရင်း အနားယူ ခိုးနားနေမိပါသည်။
အဖေ့ အရိပ်သည် အေးမြဆဲ။
(posted on 28/09/2014 08:36)
အုတ်ဂူတွေ မရှိပေမဲ့စာအုပ်တွေ ရှိနေစေရပါမယ်အဖေ။ ။
Labels: ဇင်ဝေသော်, သီဟနာဒ, အမှတ်တရ
ကျွန်ုပ်၏ မနုသတ္တဒုလ္လဘ ကွန်ယက်
ရဟန်းဘွဲ့။ ။ ဦးစိတ္တရ
မွေးရပ်။ ။ လက်ပန်ရွာ၊ မြင်းမူမြို့နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း။
မိဘ။ ။ (ဦးစိန်ဆင့်၊ ဒေါ်သိန်းညွန့်) လက်ပန်ရွာ၊ မြင်းမူမြို့နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း။
လက်ဦးဆရာ။ ။ ဆရာတော် ဦးဝိဇယ၊ ဗောဓိကျောင်း၊ ဘူးကိုင်းရွာ၊ မြောင်မြို့ နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း။
ဥပဇ္ဈာယ်ဆရာ။ ။ ဆရာတော် ဦးဇောတိကာဘိဝံသ၊ ဒေးဝန်းကျောင်း၊ မိုးကောင်းတိုက် (ညောင်ရမ်းအုပ်စု)၊ အနောက်ပြင်၊ မန္တလေး။
၁။ ဗောဓိကျောင်း၊ ဘူးကိုင်းရွာ၊ မြောင်မြို့နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း
၂။ ဒေးဝန်းကျောင်း၊ မိုးကောင်းတိုက် (ညောင်ရမ်းအုပ်စု)၊ အနောက်ပြင်၊ မန္တလေး
၃။ နိုင်ငံတော် ပရိယတ္တိ သာသနာ့တက္ကသိုလ်၊ မန္ထလေး
၄။ Buddhist and Pali Collage( Singapore)
Mangala Vihara BuddhistTemple,
30 Jalan, Eunos,
၂။ ဆန်းဒေးဓမ္မကလပ်စ် (Sunday Dhamma Classes) ဩဝါဒါစရိယ
၃။ Buddhist and Pali Collage( Singapore) အုပ်ချုပ်စီမံ၊ နည်းပြ။
၄။ National University of Singapore ဗုဒ္ဓဘာသာအဖွဲ့ ဩဝါဒါစရိယ (Spiritual adviser)
၅။ စင်္ကာပူ၊ အဘိဓမ္မာစာမေးပွဲ ကျင်းပရေး (ပြည်ပ) ဥက္ကဋ္ဌ (သို့) အတွင်းရေးမှူး
(ဒါက ဒီလိုပါ။ စာတစ်စောင်နဲ့ တစ်စောင် မတူ၊ ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်လိုက် အတွင်းရေးမှူး ဖြစ်လိုက်ပဲ)။
၆။ (ကလေးသူငယ်) ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု သင်တန်း၊ ပူးတွဲ ဩဝါဒါစရိယ။
ရ။ မင်္ဂလာမောင်မယ်အသင်း ပူးတွဲ ဩဝါဒါစရိယ။
ဇင်ဝေသော်၊ စောနေလတ်၊ သီဟနာဒ၊ (တစ်ခါတစ်ရံ ဦးကိုမောင်၊ ဆုထားမျက်ချယ်)
၁။ မောင်ငယ်ရင်သွေး နာဘိသေးလော့
၂။ လူလားမမြောက်သေးတဲ့ အတွေးများ
၃။ နားဝင်မချိုတဲ့ အမှန်တရားများ
၄။ လူ့ယဉ်ကျေးမှု ပဋိပက္ခနဲ့ ကမ္ဘာသစ်တစ်ခုကို ပုံဖော်ခြင်း ပ၊ ဒု
၅။ သုံးပုဒ်ကဗျာ (မောင်စိမ်းနီ၊ သစ္စာနီ တို့နဲ့အတူ)
၆။ ကကြိုးလေးထွေနဲ့ အောင်ဆန်းစုကြည်
၇။ ပြုံးစိစိ ချဉ်ငန်စပ်လေးများ
၈။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကမ္ဘာ့အမြင်
၉။ ကမ်လက် ဖေ့စ်ဘုတ်နဲ့ ဘလော့ဂ်
လေးစားပြီး ချစ်ခင်မိသည့် စာပေကျေးဇူးရှင်များ
၁။ မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော် ဦးဇနကာဘိဝံသ
၂။ ဆမ် ဟန်တင်တန်
(အရိုးသားဆုံး ဖွင့်ချရေးဟန် မိဘမေတ္တာဘွဲ့ ဆောင်းပါးဟောင်း နှစ်ပုဒ်ဖြစ် သည့်
(က) ရဟန်းတစ်ပါးရေးသည့်် ဆော့ဝဲလ် ပရိုဂရမ်းမင်းဝတ္ထု
(ခ) အဖေ(သို့)ကျုန်ုပ်ဘဝ၏ အာခီတက်တို့ကို
in ဇင်ဝေသော်, နိုင်ငံရေး ဂျုတ် - on 10/27/2015 - No comments
အိန္ဒိယမှာ အုန်းသီးတစ်လုံးရဖို့ကလည်း တကယ့်ကို ချဲလင့်ဂ်ျ
အဟင့် ဟင့် ဟင့်။
ဒီပုံကိုတွေ့ရင် ဒေါ်တင်တင်အောင် ဘာများ ထပ်ပြောလေမလဲ
in ဇင်ဝေသော်, အမျိုးသားရေး - on 10/27/2015 - No comments
"တပည့်တော်မ သံရုံးသွားတာ သုံးခေါက်ရှိပြီ။ အခုအထိ မဲပေးခွင့် မရသေးဘူး။ မလျှော့ဘူး၊ ရေကုန်ရေခမ်း လုပ်သွားမှာ။ တပည့်တော်မတို့ ပင်ပမ်းတယ်ဆိုတာက အဲယာကွန်းဘတ်စ်နဲ့၊ နိုင်လွန် ကတ္တရာလမ်းနဲ့။ ကိုယ့်ထက် နှစ်နှစ်ကြီးတဲ အမကြီးခမျာ နေပူမရှောင် မိုးရွာမရှောင် မညီညာတဲ့ လမ်းတွေပေါ် နိုင်ငံတော်အတွက် ခရီးသွားနေရရှာတာ။"
(ဒါနဲ့ စကားမစပ် ဒေါ်တင်တင်အောင်က ရခိုင်တိုင်းရင်းသူကြီးနော်၊ ဆျာတို့ မှတ်ထားကြအုံး)
အဲသလောက် အဓိပ္ပါယ်မဲ့တဲ့ စာသားကတောင် အမှန်တရားလိုလို
in ဇင်ဝေသော်, တို့တိ တို့တိ - on 10/27/2015 - No comments
တရုတ် ယဉ်ကျေးမှုတော်လှန်ရေးကြီးမှာ တကယ်မရှုမလှ ခံစားသွားရရှာတာက လူငယ်တွေ။
"အချိန်ကိုက် ဝင်လာသော ဒီမိုကရေစီ ရထားထက်
နောက်ကျ ဝင်လာသည့် ကွန်မြူနစ်ရထားက ပိုကောင်းသည်" တဲ့။
အဲဒီအချိန်တုန်းက အဲသလောက် အဓိပ္ပါယ်မဲ့တဲ့ စာသားကတောင် အမှန်တရားလိုလို။
သီတင်းကျွတ်ကာတွန်းပြပွဲ - junction square မှာ(27-28-29)သုံးရက်
in ကာတွန်း - on 10/27/2015 - No comments
အဘိဓမ္မာမိသားစုများ စုပေါင်းကျင်းပသည့် တတိယအကြိမ်မြောက် အဘိဓမ္မာဆုနှင်းသဘင် အခမ်းအနား (၂၀၁၄) ဖိတ်ကြားလွှာ
in ဘာသာရေးသတင်း - on 10/27/2015 - No comments
စင်္ကာပူနိုင်ငံတွင် မှီတင်းနေထိုင်လျက်ရှိကြကုန်သော ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ ...
စင်္ကာပူနိုင်ငံ အဘိဓမ္မာမိသားစုများမှ ညီညာပေါင်းစု၍ ၂၀၁၄ ခုနှစ် အဘိဓမ္မာစာမေးပွဲတွင် စင်္ကာပူစာဖြေဌာနမှ ဖြေဆိုအောင်မြင်ခဲ့ကြသော ကျောင်းသား ကျောင်းသူများအား အောင်လက်မှတ် ပေးအပ်ပွဲနှင့် ဆုချီးမြှင့်ပွဲ အခမ်းအနားကို အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း ကျင်းပ ပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပါသောကြောင့် ဓမ္မမိတ်ဆွေများအပေါင်းတို့အား မေတ္တာရှေ့ထား ကြွရောက်အားပေးကြပါရန် လေးမြတ်စွာ ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
နေရာ ။ ။ မင်္ဂလ၀ိဟာရကျောင်း (စင်္ကာပူစာဖြေဌာန)
30 Jalan Eunos Singapore 419495
နေ့ရက် ။ ။ (၁-၁၁-၂၀၁၅) ၁၃၇၇ ခု သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော် (၄) ရက် တနင်္ဂနွေနေ့
အချိန် ။ ။ ညနေ ၄း၀၀ မှ ၆း၀၀ နာရီ
အာဟာရဒါန ။ ။ ကြာဇံကြော် ၊ ဆားငံသီးဖျော်ရည်
စာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများစာရင်း (online)
အဘိဓမ္မာ (ဂုဏ်ထူးဆောင်) သုံးဆင့်လုံးအောင် 1
အဘိဓမ္မာ (ရိုးရိုး) သုံးဆင့်လုံးအောင် 20
အဘိဓမ္မာ (ရိုးရိုး) ဒု ၊ တ အောင် 9
အဘိဓမ္မာ (ရိုးရိုး) ပ ၊ ဒု အောင် 2
အဘိဓမ္မာ (ရိုးရိုး) တတိယဆင့်အောင် 7
အဘိဓမ္မာ (ရိုးရိုး) ဒုတိယဆင့်အောင် 14
အဘိဓမ္မာ (ရိုးရိုး) ပထမဆင့်အောင် 67
အဘိဓမ္မာအသင်းကြီး (စင်္ကာပူ) မမူယာနွဲ့ - 81800620 ၊ ပညာပါရမီအသင်း (စင်္ကာပူ) မမြမြမွန် - 83223535 ၊ မင်္ဂလာမောင်မယ်အသင်း မခင်နေခြည်သွင် - 93843079 ၊ ထားဝယ်မိသားစုပရဟိတအသင်း(စင်္ကာပူ) ကိုကျော်ကျော်ထွေး - 9125 0701
မှတ်ချက် ။ ။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ဖြေဆိုအောင်မြင်ခဲ့ကြသော ကျောင်းသားကျောင်းသူများမှ အောက်လက်မှတ် ထုတ်ယူရန် ကျန်ရှိသေးသူများလည်း အခမ်းအနားနေ့တွင် တာဝန်ခံများထံမှ လာရောက်ထုတ်ယူနိုင်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
လူတိုင်းအတွက် အဘိဓမ္မာအသင်းကြီး (စင်္ကာပူ)
အင်္ဂ္ဂုတ္ထိုလာ သာသနာကွယ်ကြောင်း တရားပေါင်းကား တရားမနာ ၊ စာပေမသင်၊ နှုတ်တွင်မဆောင်၊ သိအောင်မပြု ၊ ဓမ္မာနုဓမ္မပတ္တိပတ်ကွာ ဤငါးဖြာတည်း။
in 3D ဘာသာရေး, ဘုန်းဇင် - on 10/27/2015 - No comments
"တရားနာ မသွားတော့ဘူးကွာ၊ ရွာလူကြီးအလှူဆို အသောကမင်ကြီးအကြောင်း၊ ပိုက်ဆံရှိတဲ့လူတွေရဲ့ အလှူဆို ဝိသာခါ၊ အနာထပိဏ်တို့ အကြောင်း၊ ငါတို့လို့ ငမွဲတွေ အလှူဆို မဟာဒုက်အကြောင်း ဟောမှာ။ သိနေတာပဲ" ရွာက လူနောက်တစ်ယောက် ပြောတာ။ ငြင်းရ အခက်၊ လက်ခံရ အခက်။
ဘုန်းဇင်လည်း ပြောကြည့်ဦးမယ် "တရားနာ မသွားတော့ဘူးကွာ၊ စင်္ကာပူလာဟောရင် စုနိုင်မှ ချမ်းသာမယ် ဟောမှာ၊ ပြည်တွင်းမှာဟောရင် ဒကာကြီး တာဝန်ဆက်ထမ်းပါအုံး ဟောမှာ"
(အဲသလို ဟန်ချက်ထိန်းပြီး ပရဟိတ လုပ်နိုင်တာကို ကြည်ညိုတာဘာ ဖျာ့)
Labels: 3D ဘာသာရေး, ဘုန်းဇင်
ကဲ ရွှေမြန်မာ ဘယ်လမ်း ရွေးမလဲ
in ဇင်ဝေသော်, မောနင်း ပို့စ် - on 10/27/2015 - No comments
ဝိတ်နည်းနည်း တက်လာလို့ ဒီနေ့ မနက် ၆ နာရီမှာ ထပြီး လမ်းပြန်လျှောက်ဖြစ်တယ်။
၅ ပေ ၁၁ လက်မ အရပ်က ပေါင် ၁၅၅ နဲ့ ၁၆၀ ကြားမှာပဲ ရှိနေသင့် ဆိုလား။
ပြောချင်တာက ၃ လလောက် လမ်းမလျှောက်ဖြစ်တဲ့ ကာလလေးအတွင်း ယူနို့စ်နဲ့ ကမ်ဘာဂန် ဘူတာကြား တောရိုင်းကြီးက ပန်းခြံ ဖြစ်နေပါရောလား။ ကလေး ကစားစရာ၊ လူကြီး လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်စရာ စုံလို့။ အဲဒါ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မီလေး ကောက်လုပ်သွားတာ။ စလုံး အစိုးရက မပြောဘူး၊ လုပ်ပြတာ။ နောက်နေ့မှ ဓာတ်ပုံ တင်ပေးမယ်။
နောက် မတူတဲ့ လူမျိုး စရိုက် နှစ်ခု
မလေး အဘိုးကြီးတွေက ကားမှတ်တိုင်မှာ ထိုင်၊ ဆေးလိပ် သောက်၊ လေထု။
တရုတ်အဘိုးကြီးတွေက လမ်းလျှောက်၊ ပြေး၊ စက်ဘီး စီး။
ကဲ ရွှေမြန်မာ ဘယ်လမ်း ရွေးမလဲ။
"ဒဲ့" ကစ်တာတောင် ချော်သေးတယ်
in Politics, ဇင်ဝေသော် - on 10/27/2015 - No comments
ပြောင်းလဲရေးကာလမို့ ပြောရဦးမယ်၊ အရင်က ဒီကျောင်းမှာ မြန်မာ ဆရာတော်တွေရဲ့ တရားပွဲတွေကို လက်ခံတယ်။
မြန်မာဆိုတော့ တရားပွဲပြီးရင် ကျောင်းအတွက် နဝကမ္မလှူပေါ့၊ အဲဒီ နဝကမ္မက တခြားနေရာတွေမှာ ပေးရတဲ့ အခန်းငှားခထက် ပိုများနေ တတ်တယ်။
ဒါနဲ့ ပြောရတယ်။ ဒီမှာလုပ်တော့ လူမှုရေးပါလာတယ်၊ ဟို မျက်နှာကြည့်ရ ဒီ မျက်နှာကြည့်ရတွေ ရှိလာတယ်။ (အလကား မဟုတ်ဘဲ အားနာနေရ)
ကိုယ့်ဘာသာကို အခြားနေရာမှာ အခန်းငှားပြီး ခပ်ရှင်းရှင်းလုပ်ကြပါလား၊ မျက်နှာမပူရဘူး ပေါ့လို။ မရပါဘူး။
ဒါနဲ့ အားလုံးကို ပိတ်ထည့်လိုက်တယ်၊ တခါတခါ ရက်စက်လိုက်မှ။ အခု နေရာရှာပြီး လုပ်နေကြတယ်။
စောစောက စာအုပ်တွေ လက်ဆောင်ခေါ်ပေးတော့ "မေတ္တာလက်ဆောင် အလကားပေးတာပါ၊ အလကား မယူချင်ဘူးဆိုမှ ၅ ဒေါ်လာကနေ ၁၅ ဒေါ်လာအထိ လှူပါ" ပြောထားလျက်နဲ့ သင်္ကန်း ဝယ်လာသူ၊ သစ်သီး ဝယ်လာသူတွေက ပါသေးတယ်။ မခက်ပေဘူးလား။
သစ်သီးနဲ့ ကောင်လေး တစ်ယောက်ကိုတော့ ပြောထည့်လိုက်တယ်။ ၅ ဒေါ်လာဆိုရင် ရေဘေးထဲ ထည့်လို့ရတယ်၊ သစ်သီးကတော့ ဒီမှာလည်း ပိုနေလို့ မျက်နှာချင်းဆိုင်က ဆွံ့အ နားမကြားကျောင်းကို ပြန်လှူကြရတာ။ အဲဒီ ကလေးတွေ စားရတော့ ကုသိုလ်ရတာပေါ့ကွာ လို့။
သူ မျက်နှာ ပျက်သွားတယ်။ ပျက်လည်း မတတ်နိုင်ဘူး။ ကစ်ရင်တော ဒဲ့ ပဲ။ နိုင်ငံက မွဲလှပြီ၊ လက်တွေ့ ကျပါမှပေါ့။
ဗိုလ်ချုပ်တို့၊ လီကွမ်းယုတို့ ဒေါ်စုတို့ကို သဘောကျတာ အဲဒါပဲ။ သူတို့က ကစ်ရင်တော့ "ဒဲ့" ပဲ။ တောင်တောင်အီအီ မပါဘူး၊ ကြိုက်ရင် ကြိုက် မကြိုက်ရင် နေ။ ဒေါ်စု ပြောချလိုက်ရင် တချို့ ခါခါထွက်သွားတာ၊ သူပြောတာ က ရိုးရိုးလေး၊ ဒါပေမဲ့ ဒဲ့။
ဒီလောက် "ဒဲ့" ကစ်နေတဲ့ကြားက ချော်ထွက်သွားတာလည်း ရှိနေတတ်သေးရဲ့။
ဦးတင်မောင်ဝင်းတို့ ကိုယ်တို့က "စု" နေတာ ကြာပေါ့
in ဇင်ဝေသော်, ပေါ့ပေါ့ပါးပါး - on 10/26/2015 - No comments
ခွီးတဲ့၊ သူက ခုမှလာပြီး။ ဦးတင်မောင်ဝင်းတို့ ကိုယ်တို့က "စု" နေတာ ကြာပေါ့။
စလုံး အစိုးရက ငြိုငြင်၊ မြန်မာသံရုံးက ပတ်စ်ပို့ သက်တန်း တိုးမပေး။ ပြည်တော်ဝင်ဖို့ ဆိုပြန်တော့ ဘလက် လစ်တဲ့။ ကဲ ဂိုး တူ ဂျေး။
ဒါနဲ့ အိန္ဒိယ ဂုရုကြီး ဆရာဓမ္မဂင်္ဂါဆီပြေး၊ ပီအိတ်ခ်ျဒီ ကျောင်းသားဖြစ်အောင်လုပ်၊ အိန္ဒိယ သံရုံးမှာ ပတ်စ်ပို့ သက်တန်းဆက်ခဲ့ရတာ။ ပီအိတ်ခ်ျဒီ ဆိုတာကလည်း ပတ်စပို့ သက်တန်းတိုးဖို့ သက်သက်ပဲ။ ဂင်္ဂါက ပြောတယ်၊ ဒေါက်တာလုပ်ထားပါလား တဲ့။ မလုပ်ချင်ဘူး၊ ပတ်စပို့ သက်တန်း တိုးလို့ရရင် တော်ပြီ လို့။
လွယ်မှတ်လို့။ ဖေကူပါ မောင်ကူပါနဲ့ "စု" ခဲ့ကြရတာ။
ဟွန်း၊ ခက်ရချည့်။ ခ်ခ်။
ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာ အစိမ်းရောင်တွေမြင်တိုင်း အဟုတ် မှတ်မေနက်
ဘုန်းဇင်ဆို အောက်ခန်းက ကွန်နဲ့ ဖဘကလည်း ၂၄ နာရီ အွန်။
အပေါ်ထပ် အခန်းမှာလည်း အွန်။
မိနီ အိုင်ပက်လည်း အွန်။
လူက ရှိတာ မှုတ်ဝူး။ ရုပ်ပြသက်သက်ရယ် သက်လား ငိငိငိ။
in စာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲ, ဇင်ဝေသော်, အမှတ်တရ - on 10/26/2015 - No comments
ဘုန်းဇင်ကိုတော့ ဖြည့်ကြည့်ကြပေါ့ (အဲ့ ကင်မရာမင်းကို အလုပ်ဖြုတ်လိုက်ပြီ)။
မျက်နှာ တစ်ခြမ်းပေါ်က ပို့စ်မော်ဒန် ဂုရုကြီး ဆရာ သစ္စာနီ။
မျက်နှာ အပြည့်က ဆရာကြီး ဦးတင်ဦး (ကျူရှင်)။ ဟန်တင်တန်ကို ဘာသာပြန်ချလိုက်လို့ ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ဆရာကြီးက ပြောတယ်။
Comment photo from Ma Phyu Phyu Thinn
Labels: စာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲ, ဇင်ဝေသော်, အမှတ်တရ
ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ ဘိုနိုလို မျက်မှန်အမည်းကြီးနဲ့ ဘော်ဒီဂတ် လုပ်ချင်တာပေါ့
in ဇင်ဝေသော်, အမှတ်တရ - on 10/26/2015 - No comments
တိုက်ဆိုင်မှုရယ်တော့ မဟုတ်ဘူးဗျ။ ကံကတော့ ပါတယ်။
ဒေါ်စု ဥရောပခရီးစဉ်သွားချိန် U2 က တအားပေါက်နေတာ။ အဲဒီအချိန် U2
အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဘိုနိုကြီးက မျက်မှန် အမည်းကြီးနဲ့ ဒေါ်စုကို အကြိုအပို့လုပ်၊ ဘော်ဒီဂတ် လုပ်ခဲ့တာ။
ကိုယ်က ဘာမှ မဟုတ်ပေမဲ့ အဲ့ဒီဖီးလ်လေးကို သဘောကျတယ်။ ဒါ့ကြောင့် လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကမ္ဘာ့အမြင်ကို အချိန် နည်းနည်းဆွဲလိုက်တာ။ ရွေးကောက်ပွဲ ရာသီနဲ့ ညှိလိုက်တယ်ပေါ့။
ကံကောင်းချင်တော့ ဒီစာအုပ်ကလည်း ပေါက်သွား တယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင်တော့
ဘိုနိုလို မျက်မှန်အမည်းကြီးနဲ့ ဘော်ဒီဂတ် လုပ်ချင်တာပေါ့။
အခုလည်း ကိုယ့်ရှိတဲ့ ကလောင်လေးနဲ့ ၀န်းရံခွင့်ရတယ် ဆိုတော့ မဆိုးဘူးပေါ့ဗျာ။
ဒီစာအုပ်ကို အချိန်မီထုတ်လို့ ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုသူတွေ အတွက်ပါ။
"Unplayed Piano" (သံစဉ်မဲ့ စန္ဒယားတစ်လုံး)
in ဇင်ဝေသော်, အမှတ်တရ, အလင်္ကာသံစဉ်များ - on 10/26/2015 - No comments
ဟိုနေ့က ဗွီဒီယိုလေးကို စာသား၊ မြန်မာပြန်နဲ့အတူ ထပ်တင်ပေးလိုက်တာပါ။ ဒေါ်စုရဲ့ နှစ် ၆၀ မြောက် မွေးနေ့အတွက် အိုင်းရစ်လူမျိုး ကလပ်စစ် ဘုရင်ကြီး ဒမ်မီယံ ရိုက်စ်ရဲ့ လက်ဆောင်ပါ။ ကမ္ဘာဟာ သူမအတွက် မျက်ရည်စက်စက် နားထောင်ခဲ့ရတဲ့ သီချင်း တစ်ပုဒ်ပေါ့။ ရုတ်တရက် ဘာသာပြန်ထားတာမို့ အဖြစ်လောက်၊ ခံစားလို ရရုံလောက်ပဲ ရှိမှာပါ။
ကျမ ငိုကြွေးခိုက် ကျမကို ထွေးပိုက်ထားပါ
ခိုင်လုံတဲ့ အကြောင်းပြချက်လည်း မရှိ
ကျမကို ဘာအတွက် သော့ခတ်ထားကြတာလဲ
ကျမကို လူ မတွေ့စေချင်ရုံ
ကျမညတို့က မိုက်ပြီးရင်း မိုက်
Unplayed pianos are often byawindow
တံခါးပေါက်ဘေးက ဖုန်တွေပေပွ ပီယာနို
ဘယ်သူမှ မနေချင်တဲ့ အခန်းထဲ
သူမ တစ်ကိုယ်ရည် တိတ်ဆိတ်တေးသွားနဲ့
သံစဉ်တွေ ရင်ခွင်ထဲ ရှိဆဲ
Maybe it's not that easy (through the only window)
သိပ် လွယ်မယ်တော့ မဟုတ်
ကျမမှာ ဖုန်းကွယ်ထားစရာ နတ္ထိ
ဘာကြောင့်များ ဒီလောက်အကြာကြီး ဒီမှာ နေနေရပါလိမ့်
Labels: ဇင်ဝေသော်, အမှတ်တရ, အလင်္ကာသံစဉ်များ
နိုင်ငံရေးဆိုတာကလည်း သိပ္ပံပဲမို့ သံသယဆန်တဲ့ နားနဲ့ နားထောင်ရပါတယ်
in Politics, ဇင်ဝေသော် - on 10/26/2015 - No comments
ညီငယ် ညီမငယ်တို့ရဲ့၊ ဦးရွှေမန်းကြီး ပြောတာက နိုင်ငံရေး စကားပါကွဲ့။ နိုင်ငံရေးဆိုတာကလည်း သိပ္ပံပဲမို့ သံသယဆန်တဲ့ နားနဲ့ နားထောင်ရပါတယ်။ ပျော်စရာပေမဲ့ စိတ်ရှိလက်ရှိ ပျော်မပစ်လိုက်ကြပါနဲ့။
နားဝင်မချိုတုန်းကတော့ ဆရာတော် ဦးဆေကိန္ဒက သမ္မတကြီးဆီ၊ သူရ ဦးရွှေမန်းဆီ၊ ကာချုပ်ကြီးဆီနဲ့ ဒေါ်စုဆီအထိရောက်အောင် ငါကိုယ်တိုင် ပေးပေးမယ်။
ခွေးမသားလေး ငါ့ကို လေးအုပ်ထပ်ပေးလို့ မေတ္တာဆဲလေးနဲ့ စာအုပ်တောင်း၊ ၀န်ခံတော်မူခဲ့တယ်။
လူတစ်ယောက်ကိုလည်း ပို့ပေးတော်မူကောင်းပါရဲ့။ ဟိုနေ့က အုပ်ရေ ၁၅၀ ဆိုတော့လေ။
in 3D ဘာသာရေး, ဘုန်းဇင် - on 10/26/2015 - No comments
၁။ မေတ္တာတရားဟာ လူတွေအပေါ်မှာထက် တိရစ္ဆာန်တွေအပေါ် ပိုပြီး စူးရှ၊ ထိရောက်ဟန်ရှိ။ (ကိုယ်ပိုင် သုံးသပ်ချက်မို့ "It seems to me that........" လို့ ပြောသင့်ပါတယ်၊ ညီ၊ ညီမတွေအတွက်ပါ)
နာဠာဂီရိဆင်ကို မေတ္တာတရားသက်သက်နဲ့ အောင်မြင်တော်မူခဲ့သော်လည်း သစ္စကနဲ့ တွေ့ရာ၊ စိဉ္စမာနနဲ့ တွေ့ရာမှာတော့ အပြင်အကူ (External Support or help) ယူတော်မူခဲ့ရတယ်။
၂။ လူတွေထဲမှာတောင် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သူ၊ ကောက်ကျစ် ယုတ်မာသူ၊ မာနကြီး၊ တစ်ယူသန်စွဲ ပြင်းထန်သူတွေ မတူကြဘူး။
(က) အင်္ဂုလိမာလဆိုရင် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်ပေမဲ့ ရိုးသားတယ် (Cruel but honest)။ ဒါ့ကြောင့် ဘယ်သူ့အကူအညီမှ မယူဘဲ ဘုရားရှင် ချေချွတ်နိုင်ခဲ့တယ်။
(ခ) စိဉ္စမာနက ကောက်ကျစ် ယုတ်မာသူ (Cunning)၊ သူမကို ချေချွတ်နိုင် ဖို့ ကြွက်ယောင်ဆောင်တဲ့ နတ် ပါဝင်လာရတယ်။
(ဂ) သစ္စကကတော့ မာနကြီး၊ တစ်ယူသန်စွဲ ပြင်းထန်သူ (Arrogant) ပေါ့။ သူ့ကို ချေချွတ်နိုင်ဖို့အရေးမှာလည်း သိကြားတွေ၊ ဝရဇိန်တွေ ပါနေရတယ်။
အချုပ်ကတော့ ကောက်ကျစ် ယုတ်မာသူ၊ မာနကြီး၊ တစ်ယူသန်စွဲ ပြင်းထန် သူတွေနဲ့ ဆက်ဆံရာမှာ မေတ္တာတစ်ခုတည်းနဲ့ မရတတ်ဘူး။
(Loving-kindness alone may not be good or strong enough.)
ပုံလေးက ဘုန်းဇင်တို့ အိန္ဒိယခရီးစဉ်အသွား အိန္ဒိယ တစ်နေရာရာမှာ ရိုက်ခဲ့တာပါ။ အဲဒီနွားလေးမှာ မြန်မာနွား၊ အိန္ဒိယနွားဆိုတဲ့ အမျိုးသားရေး စိတ် မရှိဘူး။ သူ့ခေါင်းလေး ပွတ်ပေးလိုက်တာနဲ့ ကလေးလေးလိုဖြစ်သွား တာ။
အဲဒါ အကန့်အသတ်မဲ့ မေတ္တာ (Unconditional love) ဆက်ဆံရေး ပါပဲ။
တကယ်က တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း တရားတိုတို ဟောပေးရတယ်၊ ကြွားသလို ဖြစ်နေမှာစိုးလို့ မတင်ဖြစ် တာ။ အခုဟာကလည်း ညီရဟန်းတွေ များများလာလို့ တင်ဖြစ်၊ ဝေမျှဖြစ်တာပါ။
လောကကြီးမှာ ပါတီ နှစ်မျိုးပဲရှိတယ်
in Politics, ဇင်ဝေသော် - on 10/25/2015 - No comments
၁။ ကတိ မတည်တဲ့ ပါတီနဲ့
၂။ ကတိ မပေးတဲ့ ပါတီ။
in ဇင်ဝေသော်, ပေါ့ပေါ့ပါးပါး - on 10/25/2015 - No comments
သင် ဘယ်သူနဲ့ ပေါင်းသင်းနေတယ်ဆိုတာ ကျနော့်ကိုပြောပါ၊ သင် ဘယ်သူဆိုတာ ကျနော် ပြောပါမယ်။ (အင်္ဂလိပ် စကားပုံ)
သင့်နာမည် ဦးဌေးဦး ဖြစ်တယ်လို့သာ ပြောပါ၊ သင့် ဘုရားခန်း ဘယ်လိုနေမယ်ဆိုတာ ပြောပြပါမယ်။ (ဘုန်းဇင်၊ အုန်းခရီယေးတစ်ဗတီ)
"ကျောင်းပိတ်ရက် မဟုတ်ပါဘဲ ကျောင်းသားလေးတွေကို ဘာကြောင့်များ ဒီနေရာ ခေါ်ထားကြတာပါလိမ့်
in ဇင်ဝေသော်, လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကမ္ဘာ့အမြင် (လီကွမ်ယု) - on 10/25/2015 - No comments
၁။ ဒါလေးများ သတင်းထူး လုပ်နေရသေး။
၂။ ကမှ သတင်း။
မြတ်စွာဘုရားရှင် မြန်မာပြည်တွင် မပွင့်ရသည့် အကြောင်းရင်းများ
in ပြန်လည်မျှဝေခြင်း, ပေါ့ပေါ့ပါးပါး - on 10/25/2015 - No comments
ကမ်းလက် shared Sally Mya-Win's photo.
Sally Mya-Win with Aung Myint Soe and7others
မြတ်စွာဘုရားရှင် မြန်မာပြည်တွင် မပွင့်ရသည့် အကြောင်းရင်းများ။
၁။ မယ်တော်ကိုင်စရာ သစ်ပင် မရှိခြင်း။
၂။ နှစ်ပြည်ထောင်ကြား ခမည်းတော်နှင့် မယ်တော်ယူမိ၍ အမျိုးစောင့်ဥပဒေနဲ့ ငြိနေခြင်း။
၃။ တပြည်သူသွေးနှော၍ ဘုရင် မဖြစ်ဘူးခြင်း။
၄။ ရဟန်းပြုရန်အတွက် နတ်တို့ဖန်ဆင်းသောကျောင်းသင်္ကန်း၌ အာမခံချက်မရှိခြင်း။
၅။ ဒုက္ကရစရိယာကျင့်စရာ တောမရှိခြင်း။
၆။ ဂဏာနို့ဆွမ်း သပိတ်မျှောရန် မြစ်တွင်း ရေမရှိခြင်း။
၇။ ဗောဓိပင်နှင့် ရွှေပလ္လင်နေရာသည် တပ်ပိုင်မြေဖြစ်နေခြင်း။
၈။ ငါးဦးထက်ပို၍ တရားဟောသဖြင့် တရားပွဲကို ပါမစ်ယူရခြင်း။
၉။ တရားဟောရန် သာသနာရေးမှ ဘွဲ့လက်မှတ်သတ်မှတ်ချက် မရှိခြင်း။
၁၀။ တန်ခိုးပြာဋိကာ ပြခြင်းသည် နိုင်ငံတော်အား အကြည်ညိုပျက်စေခြင်း။
၁၁။ ပြည်ပသို့ တရားဟောထွက်၍ ကျောင်းထိုင်ခွင့်မရခြင်း။
၁၂။ နိုင်ငံခြားသားများအား ကျောင်းတွင်လက်ခံခြင်း။
၁၃။ မြစ်တစ်ခုအပေါ်မှ တရားဟောခွင့်မရှိခြင်း။
၁၄။ ဒယ်အိုးကျမည့် တရားများ ဟောပြောခြင်းကို ခွင့်မပြုခြင်း။
၁၅။ စီတန်းလှည့်လည်ခြင်းကို သံဃာအရေအတွက် အပါးတစ်ရာထက်ပိုလွန်ခြင်း။
စသည့်အချက်များကြောင့် ဗုဒ္ဓဂါယာ မြေမြတ်မဟာတွင်သာ ဘုရားပွင့်သည်။
(( Copied from Thiha Kyaw ))
ကလေးတွေကို ရိုက်တဲ့ ကျောင်းအုပ်ကြီးကို အကြံပေးချင်တာ...
in ဇင်ဝေသော်, လူကြီးမင်းများသို့ - on 10/25/2015 - No comments
ဘာမှ မသိဘဲနဲ့ သူများ ဒေါ်စုလို့ လိုက်စုနေတယ်ဆိုပြီး ကလေးတွေကို ရိုက်တဲ့ ကျောင်းအုပ်ကြီးကို အကြံပေးချင်တာ...
တစ်ပြည်လုံးက လူငယ် လူလတ်တွေကိုလည်း ခေါ်ရိုက်ပါ လို့။ ဖြူသလား မည်းသလား မသိဘဲနဲ့ သူများ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းဆိုလို့ လိုက် အောင်ဆန်းနေကြတာလေ။
ဒါတင် မကသေးဘူး။ တစ်ကမ္ဘာလုံးက ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကိုလည်း ကြိမ်လုံးကြီကြီး ရေစိမ်ပြီး ခေါ်ရိုက်ရမှာ။ ဒီလူတွေကမှ ဘယ်သူမှ မမီလိုက်တဲ့ ဘုရားကို ဗုဒ္ဓ ဗုဒ္ဓ နဲ့ ဖြစ်နေကြတာ။ ကဲကို ကဲတယ်။
ဆရာကြီး ဦးဌေးအောင်ကို သတိရတယ်
in Buddhist and Pali College, ဇင်ဝေသော်, အမှတ်တရ - on 10/25/2015 - No comments
ဆရာကြီး ဦးဌေးအောင်ကို သတိရတယ်။ တစ်နှစ်လုံး သူ သင်ချင်ရာ သင်တာ၊ သူ သင်မျှကလည်း အသစ်တွေ၊ မှတ်စရာတွေချည်းပဲ။ စာမေးပွဲအတွက် လေးပုဒ်မေးမယ်ဆိုရင် လေးပုဒ်စလုံး ပေးတာ။ ဆရာကြီးကို မချစ်တဲ့ တပည့် မရှိလောက်ဘူး။ ဒီကြားထဲ ခရမ်းဆိုတဲ့ကောင်က "ဆရာကြီး တစ်ပုဒ်လောက် ထပ်ပေးပါအုံး" ဆိုလို့ ဆရာကြီးက "တော်ပြီလေ၊ လေးပုဒ်မေးမယ်၊ လေးပုဒ်ပေးပြီးပြီပဲ" တဲ့။ အတန်ပြီးတော့ အဲ့ကောင်ကို ဝိုင်းဆဲကြတာ မိုးမွှန်နေရော။ ဆရာကြီးကများ တစ်ပုဒ် ထပ်ပေးရင် တစ်ပုဒ် ပိုကျက်နေရမှာလေ။
အခုလည်း ဆယ်ပုဒ်ကို ဆယ်ပုဒ်စလုံး ပေးထားတာ။ ချစ်အောင်လို့။
မနေ့က မေးခွန်း။ စိတ်ဝင်စားရင် ဖြေကြည့်ကြပါလား။
မေးခွန်းက သီဟိုဠ်က တိုက်ရိုက်လာတာပါ။ ဒီက ကောလိပ်ပဲ။
ဘုန်းဇင် သင်တဲ့ဘာသာရပ်။ နားလည်အောင် သင်တယ်။ မေးခွန်းကတော့ ၉ ပုဒ် ကွက်တိပေးတာ။ တပည့်မေတ္တာ ခံယူမယ့် ဆရာဆိုတော့လေ။
(October 25 at 7:11am)
Labels: Buddhist and Pali College, ဇင်ဝေသော်, အမှတ်တရ
ဘုန်းဇင်နဲ့ ဘဝတူ ညီတော်တွေအတွက်
in ဇင်ဝေသော်, ခေါင်းစားတတ်တဲ့ အင်္ဂလိပ် စကားလုံးများ - on 10/25/2015 - No comments
"အင်္ဂလိပ်စာကို ဘယ်လို လေ့လာရမလဲ" ဆိုတဲ့ အမေးတွေ ညီတော် ရဟန်းတွေဆီက ရောက်လာတတ်တယ်။ အကျဉ်း ဖြေကြည့်ပါမယ်။ အကြံပေးတာထက် အားပေးတာမျိုးပါ။
နိုင်ငံခြား တက္ကသိုလ်တွေရဲ့ ပညာရေး၊ အတွေ့အကြုံတွေကို သိချင်တာဆိုရင်တော့ ဓမ္မဂင်္ဂါ၊ မောင်ဣန္ဒက၊ မောင်သစ္စာတို့ကို မေးကြပါ။
၁။ အင်္ဂလိပ်စာအတွက် ရူးသွပ်ပါ
မန်း၊ နပသ ကျောင်းသားဘဝမှာ ဘုန်းဇင်တို့အဖွဲ့က အင်္ဂလိပ်စာအတွက် ရူးသွပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဘုန်းဇင်ဆိုရင် ဘယ်ဆရာ၊ ဘယ်စာဝါပဲ ပို့ချ ပို့ချ လက်ထဲရှိတဲ့ စာအုပ်က အဋ္ဌသာလိနီ (သို့) အင်္ဂလိပ်စာအုပ်ပါပဲ။ မန်း တောင်ပေါ်မှာ ရူးသွပ်၊ ကိုယ့်အခန်းထဲမှာ ရူးသွပ်၊ စာသင်ခန်းထဲမှာ ရူးသွပ်ဆိုတော့ နည်းနည်း စမ်းဝါးမိလာတယ်။ (ဒီနောက် မဟာသန္တိသုခရောက်။ ဒါကိုတော့ ရေးပြီးသား တချို့ရှိတာရယ်၊ ထပ်မရေးချင်သေးတာရယ်ကြောင့် ဒီမှာ မရေးတော့ဘူး)
၂။ အင်္ဂလိပ်စာအတွက် ရူးသွပ်ပါ
ဘုန်းဇင် စင်္ကာပူရောက်စ မြန်မာကျောင်းကြီးမှာနေတဲ့ သူငယ်ချင်း ဦးသီရိဓမ္မကို သူ့ ကျောင်းကော်မတီက ဗြိတိသျှကောင်ဆယ်မှာ အင်္ဂလိပ်စာ ဆက်သင်ဖို့ စပွန်ဆာပေးတယ်။ ဘုန်းဇင်လည်း ဖြစ်နိုရင်တော့ တက်ချင်တာပေါ့။ (နေးထစ် စဖိခါ တွေနဲ့ သင်ရမှာလေ) ဒါနဲ့ ပြောကြည့်တော့ အဖြေက "ဈေးကြီးလွန်းတယ်" တဲ့။ နားလည်ပါတယ်။
ဒါနဲ့ "ဗြိတိသျှကောင်ဆယ်မှာ တက်မှ တတ်မှာတဲ့လားကွာ" ဆိုပြီး အဲဒီနေ့ကစလို့ အလကားရတဲ့ စထရိတ်တိုင်းမ် အယ်ဒီတာ အာဘော်တွေကို ထိုင်ကျက်ပစ်လိုက်တယ်။ တရုတ်တွေက ပြောတယ်၊ ဘန္တေ သတင်းစာဖတ်တာက ကြာလိုက်တာ တဲ့။ ပြန်ပြောလိုက်တယ် ဘန္တေက သတင်းစာဖတ်တာ မဟုတ်ဘူး၊ သတင်းစာ ကျက်တာ လို့။
ဒါက စံဝင်တဲ့ အင်္ဂလိပ်လေ။ နှစ်နှစ်လောက်ကြာတော့ အင်္ဂလိပ်စာကို မကြောက်တော့ဘူး။
စကားပြော အခြေခံကို မန်းတောင်ပေါ်က ရခဲ့ပါတယ်။
ဘာသာပြန် အခြေခံကို စထရိတ်တိုင်းမ် အယ်ဒီတာ အာဘော်တွေဆီက ရခဲ့ပါတယ်။
"လေယာဉ်လက်မှတ်ဖိုးရှိရင် သီရိလင်္ကာကို လာခဲ့ပါ၊ ကျန်တာ ကူညီမယ်" ဆိုတဲ့ သူငယ်ချင်းရှိတာတောင် လေယာဉ်လက်မှတ်ဖိုး မပြည့်လို့ သီရိလင်္ကာကို မသွားခဲ့ရပါဘူး။ နိုင်ငံခြားတွေ၊ နိုင်ငံခြားတက္ကသိုလ်တွေ တက်ဖို့ အခွင့်အလမ်းရခဲ့ရင် ပိုကောင်းတာပေါ့။ ကြွကြပါ။ အသစ်တွေ တွေ့ရ၊ လေ့လာရမှာပေါ့။ (တချို့ဆို လက်တော်ကြီး ကျိုးနေတော်မူတာတောင် မရပ်မနား ကြွနေသေးတာပဲ)။ ဘုန်းဇင်ပြောချင်တာက ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ အခြေအနေထဲက ညီတော်တွေအတွက်ပါ။
မောင်စိန်ဝင်း စကားနဲ့ပြောတော့ "ဘယ်မှာနေနေ တွယ်တာနေဖို့ပါပဲ" တဲ့။
ဘုန်းဇင်ကတော့ "ဘယ်မှာနေနေ ရူးသွပ်နေဖို့ပါပဲ" လို့။
ဒါနဲ့ စကားမစပ်၊ စာမေးပွဲ မပြီးသေးဘူး သက်လား။ လိုက်ခ် အလှူပေးတာကို မခံယူချင်ရင် စတေးတပ် မတင်ကြနဲ့နော်။
အရိုးသားဆုံး ပြောရရင် ထောက်ခံမှုရဖို့ "ဒံပေါက်နဲ့ ငွေ ငါးထောင်ကိစ္စ" ကို အပြင်မှာနေသူ အဖို့ မျက်စေ့နဲ့ မြင်ရတာ မဟုတ်ပါဘူး။ (စင်္ကာပူကို မရိုးသားတဲ့ ဒန်ပေါက်တွေ ရောက်မလာဘူး၊ ရိုးရိုးသားသား စားစရာလေးတွေပဲ အချင်းချင်း ဝေကြတယ်။ ဒါကလည်း ဘယ်ပါတီကို ထောက်ခံသူမဆို ရကြတယ်။)
ဒါပေမဲ့ ဒါကလည်း ရွေးကော်ရဲ့ ကဘောက်တိကဘောက်ချာ ကိစ္စလို ဟိုးလေးတကျော်တော့ ဖြစ်နေတယ်။
ဒါသာ အစစ်အမှန်ဆိုရင်တော့ လက်ရှိအစိုးရရဲ့ ဉာဏ်က တစ်နပ်စား ဉာဏ်ပဲ။
ပညာမတတ်ရှာသူတွေကို နားလှည့် ပါးရိုက်လုပ်တာလို့ ဆိုချင်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ငွေငါးထောင်ယူသွားသူတိုင်း ပါးအရိုက် ခံ၊ မခံဆိုတာကတော့ မသေချာလှပြန်ဘူး။
(ဒီသတင်း မမှန်ရင် အစိုးရကိုရော၊ အစိုးရထောက်ခံသူတွေကိုပါ တောင်းပန်ပါတယ်)
ကိုယ့်ပါတီထောက်ခံသူကိုသာ ပေးတဲ့ ဒန်ပေါက်နဲ့ ဘယ်ပါတီကို ထောက်ခံသူကိုမဆို ဝေငှနေကြတဲ့ စင်္ကာပူရဲ့ စေတနာကို ယှဉ်ကြည့်ရင် အစိုးရဟာ နှလုံးရည်တိုက်ပွဲမှာ ပြည်သူကို ခွက်ခွက်လံအောင် ရှုံးနေတယ်။
ကျနော် ရေးခဲ့သမျှ စာအုပ်လေးတွေအပေါ် သံယောဇဉ်ရှိရင် ဒီ ဗွီဒီယိုလေးကို ခဏ ဖွင့်ကြည့်ပေးကြပါလား
in ဇင်ဝေသော်, အမှတ်တရ, အလင်္ကာသံစဉ်များ - on 10/24/2015 - No comments
(ကျနော် ရေးခဲ့သမျှ စာအုပ်လေးတွေအပေါ် သံယောဇဉ်ရှိရင် ဒီ ဗွီဒီယိုလေးကို ခဏ ဖွင့်ကြည့်ပေးကြပါလား။ အပြည့်အစုံ နားမလည်ရင်တောင် ခံစားမှု အပြည့်အဝ ပေးမှာပါ။ ကလစ်ကြည့်ပါ မိတ်ဆွေ)
မစ္စတာ ဒမ်မီယံ ရိုက်စ်ရေ လာကြည့်လှည့်ဦး
ခင်ဗျားတို့ ကမ္ဘာကျော် အနုပညာသမားကြီးတွေ တောင့်တနေတဲ့
အဲဒီ အသံတိတ် ပီယာနိုလေး
အခု သံစဉ်တွေ မြည်နေပြီ။
U2က ဘိုနိုကို ဖုန်းဆက် ပြောပေးပါအုံး
ပီယာနိုကိုလည်း အချိန်ရခိုက် သူမ တီးနေမှာပါ။
ကျနော်တို့ သန်း ၅၀ ကျော် နှလုံးသားတွေအတွက်
မစ္စတာရိုက်စ်ရဲ့ နှလုံးသားနဲ့ အနုပညာကို
ကျနော် အကြိမ်ကြိမ် အလေးပြုခဲ့တယ်။
ဒီမှာကြည့် ဒန်ပေါက်မဲ့ ဒီ ဂျင်နရေးရှင်းရဲ့ ဒီလို ရဲဝံ့တဲ့ ဒီဝေ့ဗ်။
in ဇင်ဝေသော်, ပေါ့ပေါ့ပါးပါး - on 10/24/2015 - No comments
ဒန်ပေါက်စားချင်ဦးလေ အခုတော့ ဖိနပ်တောင် မစီးနိုင်ဘူးမို့လား ငိငိ
in ပြန်လည်မျှဝေခြင်း, နိုင်ငံရေး ဂျုတ် - on 10/24/2015 - No comments
၁။ အတ္တသမ္မာ ပဏိဓိ
အတ္တသမ္မာ ပဏိဓိဆိုတာ မိမိကိုယ်ကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်တဲ့ မင်္ဂလာတဲ့ ကွဲ့။ အရှင်တေဇောဘာသလေးဆိုရင် ဒီမင်္ဂလာနဲ့ သိပ်ညီညွတ်တာပဲ။ သူရေးတဲ့ ပို့စ်၊ သူရေးတဲ့ ကွန်မင့်တွေကို ဘယ်သူမှ မလိုက်ခ်ခင် သူကိုယ်တိုင် အရင်ဆုံး လိုက်ခ်ပစ်တတ်တဲ့ သူတော်ကောင်း ရဟန်းငယ်လေးပေါ့။
၂။ မာတာပိတု ဥပဋ္ဌာနာ
ဖေ့စ်ဘုတ်သုံးစ မရှိသေးတဲ့ မိဘနှစ်ပါးကို ဖေ့စ်ဘုတ်သုံးစွဲလာအောင်၊ ဖရင့်တွေ ဖိတ်တတ်လာအောင်၊ တဖြည်းဖြည်း ရင်တွင်းခံစားချက်လေးတွေပါ ဝေါပေါ်မှာ ချရေးရဲလာအောင် ပြုစု၊ ထောက်ပံ့၊ အားပေးတာမျိုးကို မာတာပိတု ဥပဋ္ဌာနာ လို့ခေါ်သကွဲ့၊ ရွှန်းလဲ့၊ ဝင်းပပ နဲ့ စိုးသူဇာတိုဆိုရင် ဒီမင်္ဂလာနဲ့ ပြည့်စုံနေတာကို တွေ့ရသကွဲ့။ (အခြေအနေကောင်းရင် တစ်အိမ်ထဲ လိုက်ခ်ငါးချက်ပဲ)
၃။ ဉာတကာနဉ္စ သင်္ဂဟော
ဒီမင်္ဂလာကတော့ မောင်သစ္စာတို့ လက်နဲ့မကွာ ဖြည့်ဆည်းတဲ့ မင်္ဂလာပေါ့ကွယ်။ ပို့စ်တင်ပြီးလို့ ကြည့်လိုက်ရင် အရင်ဆုံး "Shin Thitsar likes" ကို တွေ့ရတတ်သကွဲ့။
၄။ ပုတ္တဒါရသ သင်္ဂဟော
ဒီမင်္ဂလာကို လက်နဲ့မကွာ ဖြည့်ဆည်းနေတာကတော့ ကိုတင်ထွဋ်အောင်ကြီးပါပဲ။ သူ့ဇနီး မခင်မိုးမိုးရှိန် ရေးသမျှ၊ ရှယ်မျှတိုင်းကို သူများ မလိုက်ခ်ချင်နေ သူကတော့ ပုံမှန် လိုက်ခ်ပါရမီတွေ မငြီးမငြူ ဖြည့်နေတတ်သကွဲ့။
ကဲ တရားလည်း ရှည်သွားပြီ၊ နောက်နေ့မှ ဆက်ကြဦးစို့ရဲ့။
ဒုန်း ပါ ဘု ရား။
စစ်အစိုးရလက်ထက် မြန်မာစာရေးထုံး ပြောင်းသွားပုံ
in ဇင်ဝေသော်, တို့တိ တို့တိ - on 10/24/2015 - No comments
၁။ ယနေ့ အကြွေးမရောင်းပါ။ (ခေတ်ဦး)
၂။ ယနေ့ ရောင်းရငွေသည် မနက်ဖြန်အတွက် အရင်းအနှီးဖြစ်သည်။ (ခေတ်လယ်)
၃။ ယနေ့ ရောင်းရငွေသည် မနေ့က နေ့ပြန်တိုးကို ပေးဆပ်ရန်ဖြစ်သည်။ (ခေတ်နှောင်း)
(စီးပွားရေး ပညာရှင်များကတော့ မြန်မာစာရေးထုံး ပြောင်းသွားပုံသည် စီးပွားရေးနှင့် တိုက်ရိုက် ဆက်စပ်မှုရှိသည်ဟု သုံးသပ်ကြ၏)
ကဲ အရေးပေါ် ငြိမ်းချမ်းရေး စာရွက်လေး ဘာလေး ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်ခင်ရအောင် လုပ်ကြပေါ့ဗျာ
in ဇင်ဝေသော်, လူကြီးမင်းများသို့ - on 10/24/2015 - No comments
ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့ နှစ်စဉ် ကျောက်စ်ိမ်းဝင်ငွေက ကန်ဒေါ်လာ ၃၁ ဘီလီယံဆိုလား။
လူထုကမွဲ၊ စားသွားတာက ထိပ်သီး စစ်အရာရှိကြီးတွေ၊ ခရိုနီတွေနဲ့ မူးယစ်ဆေး ရောင်းဝယ်သူတွေ တဲ့။
ကချင်လက်နက်ကိုင်နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး မရတာကလည်း ဒါက အဓိက အကြောင်း ဆိုပါလား။
ရွေးကောက်ပွဲ အမှီ ဖွလာမယ့် ပြည်ပ မီဒီယာကလည်း စိတ်ဝင်စားစရာ။
ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့ သယံဇာတက ကချင်ပြည်နယ်အတွက် ဘာမှဖြစ်မလာတော့ ဆွေးနွေးလို့ လိပ်ခေါင်းထွက်လည်း ငြိမ်းချမ်းရေးက ရလာမှာ မဟုတ်ဘူး။
in Politics, ဇင်ဝေသော် - on 10/24/2015 - No comments
စစ်မှု မထမ်းမနေရ ဥပဒေမျိုး ပေါ်ပေါက်လာနိုင်တယ် ဆိုတဲ့ စကားနဲ့စပ်ပြီး အဲသလို မေးချင်တာပါ။ (ဒီသတင်း မမှန်ဘူးဆိုရင် ကာချုပ်ကြီးကိုရော စာဖတ်ပရိသတ်ကြီးကိုပါ တောင်းပန်ပါတယ်)။ စစ်မှု မထမ်းမနေရ ဆိုလိုက်တာနဲ့ မျက်စေ့ထဲ တန်းရောက်လာတာက အစ္စရေး၊ စင်္ကာပူ။ သူတို့မှာ တူညီတဲ့ ကံကြမ္မာတွေလည်း ရှိကြရဲ့။
၁။ နှစ်နိုင်ငံစလုံးက လူဦးရေအရရော နယ်မြေအားဖြင့်ပါ ပိစိကွေးလေးတွေ။
၂။ နှစ်နိုင်ငံစလုံးရဲ့ဘေးမှာ လူဦးရေ များလွန်းလှတဲ့ မွတ်စလင် နိုင်ငံကြီးတွေ ရှိနေတယ်။
၃။ အစ္စရေးက အနောက်ဆရာကြီးတွေကောင်းမှုနဲ့ အိမ်နီးချင်းတွေ လုံးဝ သဘောမတူတဲ့ကြားကနေ နိုင်ငံအသစ် ပေါ်လာတာ (နိုင်ငံအသစ် တဖန် ပေါ်လာ) တာဖြစ်ပြီး စင်္ကာပူရဲ့အရေးမှာလည်း ဗြိတိသျှအကူအညီ မကင်းခဲ့ဘူး။
ကျနော်တို့နိုင်ငံက ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနဲ့ အိမ်နီးချင်း ဖြစ်နေတာကလွဲရင် အထက်ပါအချက်တွေနဲ့ လုံးဝ မကိုက်ညီဘူး။ တရုတ်၊ အိန္ဒိယနဲ့ ကျနော်တို့က အခန့်မသင့်တာလေးတွေ ရှိခဲ့ဖူးတယ် ဆိုတာကလွဲရင် သူသေကိုယ်သေ ဆော်ရမယ့် သမိုင်းဝင်ရန်ညှိုးတွေ (ဟို နှစ်နိုင်ငံလို) မကြီးလှ၊ မရှိလှပါဘူး။ တရုတ်ကလည်း နှပ်ချေးဗရဗွလေးမို့ ခေါင်းခေါက်နေတာကလွဲရင် မြန်မာနဲ့ ၂၁ ရာစု စစ်ပွဲ ဆင်ဖို့လောက်အထိ စိတ်မင်စားပါဘူး။ မျက်နှာ အကျအန သစ်၊ ဝတ်ကောင်းစားလှလေးနဲ့ဆို သူလည်း ခေါင်းမခေါက်ရဲလောက်ပါဘူး။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် "တပ်မတော်အင်အားရှိမှ တိုင်းပြည်အင်အားရှိမယ်" ဆိုတာကို ကျနော်တို့ အပြည့်အဝ လက်ခံပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စဉ်းစားကြည့်သင့်တဲ့ အဖြေက စစ်မှု မထမ်းမနေရ ဥပဒေမျိုး ပေါ်ပေါက်လာရေးမဟုတ်ဘဲ လက်ရှိ စစ်သားတွေကို စွမ်းရည်မြှင့်တင်ပေးရေးလို့ ထင်ပါတယ်။ အရေအတွက်အရ သိပ်မနည်းလှပါဘူး။
အဲဒီ ဥပဒေမျိုးသာ တကယ်ကြီး ပေါ်ပေါက်လာရင် နောက်ကျသွားမယ့် လူငယ်လေးတွေရဲ့ ပညာရေး၊ စီးပွားရေးကိုလည်း ထည့်စဉ်းစားရပါမယ်။ စင်္ကာပူမှာ စစ်မှု မထမ်းရဘူးဆိုတော့ မိန်းကလေးတွေက ကောင်းကလေးတွေထက် နှစ်နှစ် အချိန်စောရကြတယ်။ သူတို့ ပညာရေး၊ စီးပွားရေးက အခြေကျနေပြီဆိုတော့ ဒါက ပြသနာကြီး မဟုတ်လှဘူး။
အစစ နောက်ကောက်ကျခဲ့ရပြီ၊ တံခါးဖွင့်လာတဲ့ အစိုးရအသစ်လက်ထက်မှာ ကမ္ဘာ့ရေစီးထဲ သူများထက်မြန်အောင် ပြေးဝင်ချလိုက်မဟဲ့ ဆိုတဲ့ ကျနော်တို့ ကျောင်းသား၊ လူငယ်လေးတွေရဲ့ ပညာရေး၊ စီးပွားရေး အိပ်မက်ကို (အဲဒီ ဥပဒေကြီးက) ဇက်ကြိုးကနေ ဆောင့်ဆွဲလိုက်သလို ဖြစ်မသွားလောက်ဘူးလား။
ကျနော် မှားကောင်း မှားမယ်၊ ကျနော် ထင်တာကတော့ ဒီ ဥပဒေဟာ ဖြစ်လာမယ် မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် အပြင်းအထန် စည်းရုံးနေကြတဲ့ ကာလမှာ ကာချုပ်ကြီးကလည်း မသိမသာ စည်းရုံးရေး ဆင်းလိုက်တာလို့ပဲ ယုံကြည်ပါတယ် (ခေတ်လူငယ်တွေ စကားနဲ့ဆိုရင် ဆေးဝင်ထိုးတယ်ပေါ့ဗျာ)။ "တပ်မတော်" "နိုင်ငံတော် ကာကွယ်ရေး" စသည် စသည်ဟာ အလွန်အရေးကြီးတယ် ဆိုတဲ့စကားနဲ့ လူကြီးပီပီ သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့လေး ပြည်ခိုင်ဖြိုးအတွက် လုပ်ပေးတဲ့ စည်းရုံးရေးလို့ ယူဆရပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ စကားနည်းတဲ့ ကာချုပ်ကြီး ရုတ်တရက် ဒီစကား ကောက်ပြောချလိုက်လို့ပါ။ ဒါမျိုးစကားက လောက်ကိုင်နဲ့ ဖြစ်နေတုန်းက (သို့) အစိုးရသစ် ပေါ်လာမှ ပြောသင့်တဲ့ စကားမျိုး ဖြစ်နေလို့လေ။
"နိုင်ငံတော် ကာကွယ်ရေး" ဟာ သိပ်အရေကြီးပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ စီးပွားရေး လိုကဏ္ဍကလည်း အလားတူပဲ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကာကွယ်ရေးဟာ အရေးကြီးတယ်၊ ဒါပေမဲ့ လိုတာထက် ပိုပြီးတော့ အရေးမကြီးပါဘူး။ ဝန်ကြီးဌာနတွေ အများကြီး ထားရှိနေရတာကိုထောက်ရင် "ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန" ဆိုတာကလည်း အခြား အရေကြီးတဲ့ ဝန်ကြီးဌာနတွေထဲက တစ်ခုပါပဲ၊ လုံးဝ မပိုပါဘူး။
in စာဖတ်သူသို့ပြန်စာ, ဇင်ဝေသော် - on 10/23/2015 - No comments
အရှင်ဆရာ ဇင်ဝေသော် ..
ဆရာသည် မထုံတတ်တေး ပညာတတ်လူတန်းစားအရေအတွက်များပါက လူ့အဖွဲ့အစည်း နာသည်ဟု ဆိုတော်မူ၏။
မထုံတတ်တေးရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကိုလည်း အကျယ်ဖွင့်ဆိုပြသင့်သေးသည်မဟုတ်ပါလော...
မထုံတတ်တေး၏ အဓိပ္ပါယ်ကို မပြဆိုပါက ဆရာ့အပေါ်၌ အဗျာပိတ အပရိပုဏ္ဏဒေါသ (စကားအဓိပ္ပါယ် မပြည့်စုံခြင်း) သင့်ရောက်လေရာ၏...
ဤသို့ စောဒနာဖွယ် ရှိသောကြောင့် "........." ဟူသော အဆိုကို ဇင်ဝေသော် ဆက်မိန့်။
မထုံတက်တေးဟူသည်ကား မဌေးတက်တုံ၊ မဌေးဘဲ တက်တုံ (ဆင်းတုံ) ဟူသည်တည်း။
ဒီနည်းကို ကျမ်းတက်ကျမ်းထွက်လို့ခေါ်ပြီး ဓမ္မာစရိယတန်းမှာ ဖြေဆိုကြရပါတယ်။ ပေး ထားတဲ့ ဝါကျရဲ့ အဓိပ္ပါယ်တွေကို ကြည့်၊ အပြစ် မရောက် ရောက်အောင် ရှာကြံပြီး စောဒနာခြင်း၊ မေးခွန်းထုတ်ခြင်း အတတ်ပညာပါ။ အလွန်ခေတ်မှီပါတယ်။ အခုနှစ်တွေမှာ ကမ္ဘာ့တက္ကသိုလ်ကြီးတွေ အလေးတယူလုပ်လာရတဲ့ "Critical thinking" ဆိုတာက ဓမ္မာစရိယ ပြီးသွားတဲ့ ရဟန်းတွေအတွက် အသစ်အဆန်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
in ကာတွန်း - on 10/23/2015 - No comments
ကမ်းလက် shared Than Htike's post.
in ဇင်ဝေသော်, အမှတ်တရ - on 10/23/2015 - No comments
ခရီးသွားမှတ်တမ်း, ဇင်ဝေသော်, အမှတ်တရ - on 10/23/2014 (မနှစ်က)
နေ့ဆွမ်းက ထိုင်ပေအပြန် ရထားပေါ်မှာ
ပြီးတော့ အသေးစား မွေးနေ့ကိတ်ကလေး
Happy birthday တစ်ဖွဲ့လုံး English လို ဆိုကြ
ပြီးတော့ မင်ဒရင်းလို ဆိုကြ
သေချာတာက မြန်မာလို မပါလိုက်ဘူး
(အခု ဒီနှစ်လည်း ဖုန်းမက်ဆေ့တွေ တတီတီနဲ့ ဝင်နေပြီ
ဒီလူက မွေးနေ့က နှစ်မျိုး၊ မွေးနှစ်က နှစ်မျိုး၊ အမေရေ ဘယ်ပါတီကို မဲပေးရမှာလဲ)
ကျနော်နဲ့ ငါးနှစ်တာ မြန်မာ့သမိုင်း
in Politics, ဇင်ဝေသော် - on 10/23/2015 - No comments
"အမျိုးစောင့် ဥပဒေကို အတည်ပြုပေးတာလောက်နဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်လိုက်တော့ ကျနော့်မှာ မရှိတဲ့ မဲကတောင် ဒေါ်စု၊ အန်တီစု၊ အမေစုအတွက် ဖြစ်သွားရော"
စစ်တပ်အသိုင်းအဝိုင်း "ငါတို့က စိတ်ရင်း စေတနာမှန်နဲ့ ပြောင်းလဲလာတာ၊ သူတို့က နားမလည်၊ မပူးပေါင်းဘဲ အတိုက်အခံ လုပ်နေတာ။ လူညံ့တွေ"
လူထုအမြင် "သမိုင်းတစ်လျှောက်လုံး ကောင်းတာဆိုလို့ ဘာတွေ လုပ်ခဲ့လို့ ယုံကြည်နေရမှာလဲ၊ စစ်အာဏာရှင်အစိုးရ အလိုမရှိ၊ အစိတ်သား အလိုမရှိ"
၂၀၁၁ ရာသီဦး၊ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ ပွဲဦးထွက်ဟာ ကျေနပ်စရာ အတော်ကြီးကောင်းခဲ့တော့ မြန်မာသာမက ကမ္ဘာကပါ လက်ခုပ်တွေ တဖြောင်းဖြောင်း တီးခဲ့ကြတယ်။ အဲဒီအထဲ ကျနော်လည်း ပါခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီတုန်းကဆိုရင် ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်ဆုတောင် ပေးသင့်တယ်လို့ ဆိုလာသူ ပြည်ပ မီဒီယာတွေတောင် ရှိခဲ့တယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်ဆုရှင်နှစ်ယောက်နဲ့ ကမ္ဘာ့ရေစီးထဲ ဒိုးဒိုးဒေါက်ဒေါက် ဝင်းခွင့်ရမယ့် အရေးကို တွေးပြီး ကျနော်ဆို သတင်းစာတွေဖတ်ရင်း ပျော်လိုက်ရတာလေ၊ မပြောပါနဲ့တော့။ ငါးနှစ်သက်တန်း ကုန်ခါနီးမှာ ဇာတ်လမ်းက ဂငယ်ကွေ့ ချိုးကွေ့သွားတော့ ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်ဆု အသာထား အာဏာရှင် စာရင်းထဲတောင် ဝင်သွားခဲ့ပြန်တယ်။
၂၀၁၄ လောက်ဆီက "ဦးသိန်းစိန်သာ ရွေးကောက်ပွဲမဝင်ခင် ကပ်ပြီး
(က) အကျင့်ပျက် လာဘ်စားမှုနဲ့
(ခ) မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု အရှုပ်ကို ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိ ကိုင်ပြလိုက်ရင် ဒေါ်စု အတော် ကြိတ်ယူရလိမ့်မယ်" လို့ နိမိတ်ဖတ်ခဲ့၊ နီးစပ်ရာကိုလည်း ပြောဖြစ်ခဲ့တယ်။
ဒါပေမဲ့ အမျိုးစောင့် ဥပဒေကို အတည်ပြုပေးတာလောက်နဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်လိုက်တော့ ကျနော် တော်တော်ကြီး စိတ်ပျက်သွားတယ်။ ဒါလောက်နဲ့တော့ ကမ္ဘာ့ရေစီးအထိ လှမ်းကြည့်စဉ်းစားနိုင်တဲ့ ပညာတတ်အများစု ရင်ဘတ်ကို လုံးဝ မထိနိုင်ပါ။
ကမ္ဘာသိ ကမောက်ကမ ရွေးကော်၊ ပြိုအိကျလာတဲ့ အနီရောင် လှိုင်း (ကျနော် အပါအဝင်)။ မျက်စေ့ ဒေါက်ထောက်ကြည့်နေမယ့် ကမ္ဘာ့မီဒီယာ။ ပွဲကြီးပွဲကောင်းပါပဲ။
အမျိုးစောင့် ဥပဒေကို အတည်ပြုပေးတာလောက်နဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်လိုက်တော့ ကျနော့်မှာ မရှိတဲ့ မဲကတောင် ဒေါ်စု၊ အန်တီစု၊ အမေစုအတွက် ဖြစ်သွားရော။
သမ္မတကြီး ဘာလဲ၊ ဘယ်လဲ။
in ကဗျာ, ဇင်ဝေသော် - on 10/23/2015 - No comments
တစ်ညလုံး ထုပ်ပိုးနေရှာတဲ့ ရနံ့တွေလေ
မြု့တော်ပေါက် အရောက်သွားဖို့ တဲ့။
ကာချုပ်က ပြောတယ် နိုင်ငံခြားသားများရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုခံရသူများ ကို မဲမပေးသင့်ဘူးတဲ့
in ပြန်လည်မျှဝေခြင်း - on 10/22/2015 - No comments
ကမ်းလက် shared Tin Lay's post.
Tin Lay added4new photos.
October 22 at 12:35am ·
ကာချုပ်က ပြောတယ် နိုင်ငံခြားသားများရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုခံရသူများ ကို မဲမပေးသင့်ဘူးတဲ့။
နိုင်ငံခြားသားတွေကို လွှမ်းမိုးနိုင်သူဖြစ်ရင်ကော ကာချုပ်ကြီး။
ဒီနိုင်ငံခြားသူလေးတွေက NLD ရဲ့ လွှမ်းမိုးမှု ခံရှာသူတွေပါ။ ကျုပ် NLD ကို မဲပေးလိုက်တော့မယ်နော်။
in Politics, ဇင်ဝေသော် - on 10/22/2015 - No comments
အဲ့ဒါ ပညာတတ် လူလတ်တန်းစားပါပဲ။
ဘီစီ ၆ ရာစုကို လှမ်းကြည့်၊ ရဟန်း၊ ရဟန်းမတွေဝတ်၊ မဂ်ဖိုလ်တွေ အများဆုံး ဆိုက်သွားတဲ့ လူတန်းစားက အဲဒီ ပညာတတ် လူလတ်တန်းစား။
ဒီ သီအိုရီ မှားသွားပြီလား???
ကမ္ဘာ့သမိုင်း တော်လှန်ရေးနဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေကို ဆက်ကြည့်ပါ။ ဒီ သီအိုရီကနေ ခွာမသွားဘူး။
လက်ရှိ မြန်မာ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးရဲ့ နောက်ကမောင်းနှင်အားကြီးကလည်း ဒီ ပညာတတ် လူလတ်တန်းစားပါပဲ။
နိုင်ငံတော်ဟာ ဖက်စုံ အောက်ဆုံးအဆင့်ကို ရောက်နေတယ်။ အစိုးရကို ထောက်ခံရင် အစိုးရဘက်ကနေ၊ အတိုက်အခံကို ထောက်ခံရင် အတိုက်အခံဘက်ကနေ။
လူလတ်တန်းစားဟာ သူ့တာဝန်ကို သိနေရတယ်။ အဲသလို မဟုတ်တဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းဟာ အသေပဲ။
၁။ သူဌေးက ဆုံးရှုံးစရာတွေများလွန်းတော့ ခွထိုင်တတ်တယ်။
၂။ အောက်ခြေ လူတန်းစားက ပညာ၊ အတွေ့အကြုံ၊ ပတ်ဝန်းကျင် စသည် နိမ့်ကျနေတော့ ယုံကြည်ချက် မရှိလှတတ်ဘူး။
ဒါ့ကြောင့် ဒီ လူလတ်တန်းစား နှစ်ရပ်ကို လှမ်းယူ၊ လက်တွဲခေါ်သူက ပညာတတ် လူလတ်တန်းစား ဖြစ်သွားတယ်။
မထုံတတ်တေး ပညာတတ် လူလတ်တန်းစား အရေအတွက်များရင် အဲဒီ လူ့အဖွဲ့အစည်းကတော့ နာပေတော့ပဲ။
ဒီနေ့က ဇင်ဝေသော်လေးရဲ့ ရက်လည်ပေါ့ဗျာ
in ဇင်ဝေသော်, အမှတ်တရ - on 10/22/2015 - No comments
ဒီနေ့က ဇင်ဝေသော်လေးရဲ့ ရက်လည်ပေါ့ဗျာ။ ဒီပုံလေးကတော့ သူများရေးထားတာလေးမို့ အမှတ်တရ တင်လိုက်တာပါ။
ဒါနဲ့ မသိလို့မေးရဦးမယ်။ မဲ ဘယ်လိုပေးရမယ်ဆိုတာ သေသေချာချာနားလည်အောင် တစ်ဦးချင်း လိုက်ပြီး ရှင်းပြ၊ သင်ပြနေသလိုမျိုး
ဦးတင်အေးတို့အဖွဲ့ကိုရော သင်ပြ၊ ရှင်းပြခွင့်ရော မရှိဘူးလား၊ ပြည်တွင်းက မိတ်ဆွေတို့ရေ မေးမြန်းကြည့်ကြပါအုံး။
သင်ပြခွင့်ရှိရင်လေ စလုံး လုပ်အားပေးတစ်ဖွဲ့ကို ခေါ်၊ ဘုန်းဇင် ဝါပန်ပြီး လာခဲ့ချင်လွန်းလို့ပါ။
ဇရာ၊ ဗျာဓိ၊ မရဏတို့သည် အရှိတရား အစစ်။ ပျိုမြစ်နုနယ်၊ လှပကြွယ်ဝ စသည်တို့က အခိုက်အတန့်မျှသာ ဖြစ်သည့်အတွက် အရှိတရား အတု။ (ဗုဒ္ဓ)
ဘယ်နေရာရောက်ရောက် စောင့်ရှောက်ခဲ့၊ စောင့်ရှောက်နေသော အမျိုးသားရေးက အစစ်၊ အရေးပေါ်မှ တစ်ခုခုအတွက် ရုတ်တရက်ပေါ်ပေါက်လာသော အမျိုးသားရေးက အခိုက်အတန့်မျှသာ ဖြစ်သည့်အတွက် အတု။ (ဇင်ဝေသော်)
ဂျပန်၊ တိုကျိုသံရုံးမှာ ပေးရမယ့် မဲတွေကို အီဂျစ်ကို ပို့ထည့်ချလိုက်ဆိုလား
in ဇင်ဝေသော်, လူကြီးမင်းများသို့, မောနင်း ပို့စ် - on 10/22/2015 - No comments
စိတ်ပျက်တယ်၊ အံ့ဩတယ်၊ ရယ်ချင်တယ် ရွေးကော်ရယ် သက်လား
သတင်းကတော့ သိကြပြီးသားပါ။ ပြည်ပ ကြိုတင်မဲပေးခွင့် ရက်တိုးပေးမယ်၊ အခု ဆွေးနွေးနေတယ်၊ ဘယ်နေ့ ဘယ်ရက် မသိရသေး။
ရွေးကောက်ပွဲ အတွေ့အကြုံမရှိလို့ မှားယွင်းခဲ့ရ၊ မဲပေးသူတွေက စိတ်ရှည်ပေးကြဖို့ ရွေးကော်က တောင်းပန်။
အဖွဲ့ချုပ်က တောင်ပြိုကမ်းပြို နိုင်ခြေရှိ၊ စသည် စသည်။
ဒီမနက် ပါးစပ် ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော် ဖွင့်ရီလိုက်မိတာက ပုံ နှစ်။
ဂျပန်၊ တိုကျိုသံရုံးမှာ ပေးရမယ့် မဲတွေကို အီဂျစ်ကို ပို့ထည့်ချလိုက်ဆိုလား။ ကျန်း လုပ်ပုံက။
Labels: ဇင်ဝေသော်, လူကြီးမင်းများသို့, မောနင်း ပို့စ်
in ကဗျာ, ဇင်ဝေသော် - on 10/22/2015 - No comments
နိုင်ငံတော်လည်း သွေးစွန်းခဲ့ပြီ အဘိုးရေ
နိုင်ငံတော်လည်း သွေးစွန်းခဲ့ပြီ အဖရေ။
in ဇင်ဝေသော်, ပေါ့ပေါ့ပါးပါး - on 10/21/2015 - No comments
သာမဏေကျော် တဲ့။ ကောင်းပါတယ်လေ။ ဒါပေမဲ့ ဒီဖက်က နိုင်ငံကျော်တွေကို ဝန်းရံတဲ့အဆင့် ဖြစ်နေတာ။
ကိုယ်နဲ့ ဓမ္မဂင်္ဂါက နိုင်ငံအကျော်လွန်ပြီး ဟိုဖက်ပြုတ်ကျမှာ စိုးရိမ်နေရတာ။
မန္တလေးက ဆရာသမား ပြောတာကို သတိရတယ်
"ဒီကောင့်အဆင့်က တက္ကသိုလ် လွန်နေပြီ"
"တက္ကသိုလ် လွန်ရင် ဘယ်အဆင့်ရောက်သွားတာလဲ ဦးဇင်း"
"တက္ကသိုလ် ဟိုဖက်က ရေနီမြောင်းလေကွာ၊ တက္ကသိုလ်ကျော်ပြီး ရေနီမြောင်းထဲ ပြုတ်ကျတာပေါ့" တဲ့။
in ကာတွန်း - on 10/21/2015 - No comments
ကမ်းလက် shared ပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီ's photo.
ကျနော် လေ့လာမိတဲ့ ဈေးရောင်း ဈေးဝယ် နိုင်ငံရေး သီအိုရီ
in Politics, ဇင်ဝေသော် - on 10/21/2015 - No comments
နိုင်ငံရေးမှာ အစိုးရနဲ့ အတိုက်အခံဆိုတာ ဈေးရောင်း ဈေးဝယ်ပါ။
အစိုးရက ဈေးရောင်းသူ၊ အတိုက်အခံက ဈေးဝယ်သူ။
(က) ဈေးရောင်းသူက ပစ္စည်းမှန်ဖို့ အလေးထားရမယ်။
ဈေးဝယ်သူကလည်း ကိုယ်ဝယ်မယ့် ပစ္စည်း မှန်၊ မမှန် စစ်ဆေးရမယ်။
ဒါပေမဲ့ ပစ္စည်းက အတု ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် ကိုယ်ကျင့်တရားရေးအရ ဈေးဝယ်သူထက် ဈေးရောင်းသူမှာ တာဝန်ပိုရှိပါတယ်။
(ခ) နောက်ပြီး ဈေးရောင်းသူက ပစ္စည်းကို ကြိုက်တဲ့ဈေး သတ်မှတ်ထားနိုင်တယ်။
ဈေးဝယ်သူက ဈေးနည်းသထက်နည်းအောင် ဈေးဆစ်ခွင့် ရှိပါတယ်။
ဈေးကတော့ မှန်နေပြီဆိုတာ သိလျက်တောင် ဈေးဝယ်သူက ရလိုရငြား ထပ်ဆစ်နေတတ်ပါတယ်။
(ဂ) ဒီသီအိုရဲ့ အဖြေအရ
ဈေးပိုပေးပြီး ဝယ်လာမိတယ်ဆိုရင် ဈေးဝယ်သူရဲ့ အားနည်းချက်ဖြစ်ပြီး (ကိုယ်ကျင့်တရားရေးအရ ရှက်စရာ လုံးဝ မဟုတ်ပါဘူး၊ မသိမှား မှားခြင်းမျှသာပါ)
ပစ္စည်း မမှန်ဘူးဆိုရင်တော့ ဈေးရောင်းသူရဲ့ မှားယွင်းမူပါ။ (သိသိကြီးနဲ့ လိမ်ညာတာမို့ ကိုယ်ကျင့်တရားရေးအရ လုံးဝ အောက်တန်းကျ၊ ရှက်စရာလည်း ကောင်းပါတယ်)
ကျနော် မျက်နှာကြီးရာ ဟင်းဖတ် ပါမိပါသလား။
မိုးရွာပြီး ပြန်တိတ်သွားရင် ...
ဘဝချင်းတူလို့ ပိုယုံတယ် (၃)
အခုတလော အဖွဲချုပ်အတွင်းရေး ဆိုတာတွေ တွေ့တွေ့နေရလို့ "ဘဝချင်းတူလို့ ပိုယုံတယ် (၃)" ကို ဆက်ရေးမိပါတယ်။ ယုတ္တိ ရှိ မရှိ သုံးသပ်ကြည့်ကြပါ ပညာရှင်အပေါင်းတို့။
လက်ထောက် ဘုန်းကြီးပေါက်စလေးဘဝမှာ ဒီကျောင်းရှိ တရုတ် ဒကာ၊ ဒကာမတိုင်းလိုလိုက ဘုန်းဇင်ကို သဘောကျကြ၊ ရင်းနှီးလေးစားကြ ပါတယ်။ ဒါက ဘာကြောင့်လည်းဆိုရင် အရေးကြီးတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ချရမယ့်နေရာ (Decision maker) မဟုတ်လို့ပါပဲ။
သေသေချာချာ တွက်ကြည့်တော့ အရေးကြီးတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို ကိုယ့်လူတွေကတောင် ရာနှုန်းပြည့် သဘောမတူတတ်ပါဘူး၊ အများသဘောတူရင်၊ ကိုယ်လည်း မှန်တယ်လို့ထင်ရင် ဒူးသာဒူး ဆုံးဖြတ် ကြရတာပါ။ ဒေါ်စုနဲ့ အဖွဲချုပ်အတွင်းရေးဆိုတာ ဒီ သီအိုရီအတိုင်းပဲ ရှိနေပါလိမ့်မယ်။
ဥပမာလေးတစ်ခု ပြပါမယ်။ ဒီကျောင်းရဲ့ ညနေခင်း ဘုရားဝတ်တက်တွေမှာ တစ်ရက်ကို ခေါင်းဆောင် (တိုင်ပေးသူ) တစ်ယောက် ရှိပါတယ်။ သူတို့ကို "Evening Service leader" လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ရက် ၃၀ လ ဆိုရင် ခေါင်းဆောင် ၃၀။ ၃၁ ရက် လဆိုရင် ခေါင်းဆောင် ၃၁ ပေါ့။ လူတိုင်းလိုလိုကလည်း ဒီတာဝန်ကို အမြတ်တနိုးရှိကြတော့ နေရာဖယ် မပေးချင်တတ်ကြဘူး။ ခေါင်းဆောင် ၃၁ ဆိုပေမယ့် ထိမရ၊ တို့မရတဲ့ လူဟောင်းကြီးတွေ ရှိနေတဲ့အတွက် လူသစ်တွေ ဝင်လာဖို့ အခွင့်အလမ်းက တော်တော်ကျဉ်းမြောင်းနေတယ်။
ဘုန်းဇင် ကျောင်းထိုင်ဖြစ်တဲ့နောက် ပြောင်းလာပစ်လိုက်တာတွေထဲမှာ ဒါလည်းပါပါတယ်။ ဒီပြောင်းလဲမှုမျိုးက လူထုအမြင် (Public image) ကို ပြောင်းလဲသွားစေတတ်ပြီး လူသစ်တွေ ဝင်လာဖို့ လမ်းဖွင့်ပေးလိုက် သလို ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ ဒါက သီအိုရီပါ။
လူဟောင်းကြီးတွေကို ဖြုတ်မယ်ဆိုတော့ ချဲယာမန်းပါ ဒီအထဲမှာ ပါနေရော။ ဒါနဲ့ သူနဲ့ နှစ်ယောက်ချင်း ဆွေးနွေးလိုက်တယ်။ သူ သဘောပေါက် လက်ခံတယ်။ ဒါဟာ ကျောင်းရဲ့ အနာဂတ်အတွက်။ သူကပြောတယ် "Alright Bhante. Please take my name off first" တပည့်တော်နာမည်ကို အရင်းဖြုတ်ပစ်လိုက် တဲ့။
ဒါနဲ့ ထိမရ၊ တို့မရ လူဟောင်းကြီး ဆယ်ယောက်လောက်ကို ဖြုတ်ပြီး လူသစ်တွေနဲ့ အစားထိုးလိုက်တယ်။ ဘာပြောကောင်းမလဲ၊ ဝေဖန်သံတွေ ပွက်လောကို ညံထွက်သွားတာပဲ။ ဥက္ကဋ္ဌကအစ ကိုင်လိုက်တော့ မျက်နှာချင်း ဆိုင်လည်း လာမပြောရဲကြဘူး၊ ကွယ်ရာကပဲ ပြောနေကြတာ။ ဘုန်းဇင်ကလည်း မျက်နှာချင်းဆိုင် လာမပြောလို့ကတော့ ဂရုကို မစိုက်တာ။
ဒါပေမဲ့ လူထုအမြင် (Public image) က ချက်ချင်းပြောင်းသွားတယ်။ "လက်ရှိ ဘုန်းကြီးပေါက်စက ဆော်စရာရှိရင်တော့ ဆော်သဟ၊ သူဆော် ရင်လည်း သူ့ ချဲယားမန်းကအစ ဆော်တာ" ဆိုတာမျိုးဖြစ်သွားတော့ ကျောင်းက လူဟောင်းတွေ၊ လူသစ်တွေနဲ့ ပို စည်ကားလာတယ်။
သူတို့ဆရာ၊ ကျောင်းထောင်ပေးသွားတဲ ဆရာတော်ကြီးကတောင် သူတို့ကို ဒီလိုမဆက်ဆံခဲ့ဘူးဆိုပြီး အမြင်မကြည်၊ ကျောင်းကနေ ခပ်ခွာခွာလုပ်သွား ကြတဲ့ လူကြီးတွေကိုယ်တိုင် အမြင်မှန်တွေရပြီး အခု ပြန်ရောက်လကြပါပြီ။
ဒေါ်စုရဲ့ မဟာဗျူဟာ အရွှေ့မှာ လူဟောင်း ဘယ်နှယောက် ထိသွားမလဲ၊ သူတို့အတွက် လေးလေးနက်နက်ကြီး ကိုယ်ချင်းလည်း စာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးဟာ လူဟောင်းတွေရဲ့ အနစ်နာခံခဲ့မှုတွေကို မသိလို့၊ ကျေးဇူး မတင်လို့ မျက်နှာလွှဲ ခဲပစ် လုပ်တာမျိုး မဟုတ်နိုင်ပါဘူး။ အလွန် ခက်ခက်ခဲခဲ ချယူရတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုး၊ မျက်စေ့မှိတ်ပြီး "ကဲ လုပ်တယ်ကွာ" ဆိုပြီး ဆုံးဖြတ်ရတာမျိုးပါ။ ဒါတွေဟာ နိုင်ငံရဲ့ အနာဂတ်အတွက် ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။
ဘဝချင်းတူနေတော့ ဘုန်းဇင်တို့ကတော့ ဒေါ်စုဆို "ဒုန်း ဒုန်း" ပဲ။ အရေးကြီးတဲ့ ဆုံးဖြတ်တွေရဲ့ အမှန်၊ အမှား၊ အရှုံးအမြတ်ဟာ ကာလ အတော်ကြာမှ အဖြေသိရတတ်ပါတယ်။
ကဲ ဆွေဇင်ရေ၊ ဒီမြားက ကိုယ့်ရင်ဘတ်ကို ပြန် ချိန်ထားတဲ့ မြားပါပဲ။ ရဲရင် ဆက်လွှတ်ပေါ့။ ဒီကတော့ လွှတ်လိုက်ပြီ။
in ဇင်ဝေသော်, ဒိုးဒိုးဒေါက်ဒေါက် - on 10/20/2015 - No comments
မောင်မောင်ချာတိတ်။ ။ ဘုန်းဘုန်းတို့က ဖေ့စ်ဘုတ်ပေါ်ကတင် "ဒုန်း" နေတာ၊ မြေပြင်မှာက....။
ဘုန်းဇင်။ ။ ဟာ့ ဒကာ ငချာရ၊ ဒို့က ဖေ့စ်ဘုတ်ပေါ်ကတင် မဒုန်းလို့ သင်္ကန်း ခါးတောင်းကျိုက်ပြီး ဦးတင်အေးကြီးကို လိုက်ရိုက်နေရမှာလား။ မလုပ်ကောင်းဘူး။
Labels: ဇင်ဝေသော်, ဒိုးဒိုးဒေါက်ဒေါက်
in ဇင်ဝေသော်, ပေါ့ပေါ့ပါးပါး - on 10/20/2015 - No comments
"စားချင်တာက နာမ်၊ စားနေတာက ရုပ်။
သူမဟုတ် ငါမဟုတ် အဲဒါ အဖွဲ့ချုပ်
(အဲလေ မှားလို့၊ ပြင်ဆို) အဲဒါ နာမ်နဲ့ ရုပ်။"
ကဲ အဲဒါ အာဏာရှင်ဆန်တာလား
in သီဟနာဒ, ကျောင်းတွင်းမှတ်စု - on 10/20/2015 - No comments
လွန်ခဲ့တဲ့ ခြောက်လလောက်တုန်းက ကျောင်းမှာ ဆွမ်းချက်က တရုတ်ဒကာကြီး၊ ဟင်းချက်ကောင်းတယ်၊ ယောက်ျားဆန်တယ်။ ချက်ပြီး စားပွဲပေါ် တင်ထား တာပဲ၊ ကြိုက် ရာစား၊ စားချင်စား မစားချင်နေ။ သူ့အပူ မပါဘူး။
အခု ဆွမ်းချက်က တရုတ်ဒကာမကြီး၊ သူက စားနေရင် ဘေးကနေပတ်ပြီး အကဲခတ်နေ တာ။ ကျန်းမာရေးနဲ့ သိပ်မသင့်ဘဲ ကိုယ်ကြိုက်လို့ အများကြီး စားလိုက်တာ မျိုးဆို ပြီးရင် သိပ်မစားဖို့ ပြောတတ်တယ်။
ဥပမာ။ အခု မနက်ပိုင်းတွေမှာဆိုရင် တစ်ပတ်နှစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီး အီကြာကွေး မစားရတော့ဘူး။
ကဲ အဲဒါ အာဏာရှင်ဆန်တာလား။
ဘုန်းဇင်တို့ကတော့ မထင်။ စေတနာမပါဘဲ ဒီစကားတွေက ထွက်ကို မလာဘူး။
၂၀၂၅ လောက်မှာ တွေ့မယ်ဗျာ
in ဇင်ဝေသော်, မောနင်း ပို့စ် - on 10/20/2015 - No comments
ဒီနေ့ မြန်မာသတင်း မပါဘူး။ ဒါနဲ့ ဝတ္ထုလေးတစ်ပုဒ်လိုဖြစ်အောင် ဓာတ်ပုံတွေကို ဆွဲကပ်လိုက်တယ်။
၁။ အောင်ပွဲခံသွားတဲ့ ကနေဒါက လစ်ဘရယ်။
၂။ NUS ရဲ့ ပညာရေးဝန်းကျင်။ အဲဒီကို ရောက်မိတိုင်း ရွာက ညီတွေ၊ ညီမတွေအတွက် အဲဒါတွေကို ပါဆယ်ထုပ်ပြီး ပို့ချင်စိတ်တွေ ပေါက်ပေါက်နေမိတယ်။
၃။ သုတေသနနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှု အရင်းအနှီးတွေဆီက အမြတ်တွေ ပြန်ရလာနေပါပြီ လို့ ခပ်ကြွားကြွားလေး ပြောနေတဲ့ စင်္ကာပူ ဝန်ကြီးချပ်။
အဆင့်ရှိတဲ့ အစိုးရတစ်ဖွဲ့ ရရှိပြီး ဆယ်နှစ်အတွင်းလောက်မှာ လူကြီးမင်းတို့ နဲ့ လယ်ဗယ်တူ ဖိုက်ချင်တယ်ဗျာ။ လူကြီးမင်းနိုင်ငံသားတွေနဲ့ တစ်ဦးချင်း နှလုံးရည် တိုက်ပွဲတွေမှာ ကျနော်ကလည်း ရှုံးပွဲ မရှိသေးပါဘူး။
နောက်ပြီး ကျနော်တို့ အုပ်စုကြီးက လူသာ သေသွားမယ်၊ မြန်မာ ပတ်စပို့ကို မစွန့်ကြဘူး။ ဒါကိုလည်း လူကြီးမင်းတို့ လဝက သိတယ်နော်။
၂၀၂၅ လောက်မှာ တွေ့မယ်ဗျာ။
ဒေါ်စု၊ မစ္စတာဖော့ဒ်၊ အပ်ဘဆိုလုတစ်ဇင်နဲ့ ဇင်ဝေသော်
in ဇင်ဝေသော်, အမျိုးသားရေး - on 10/20/2015 - No comments
နိုင်ငံရေးစာပေလိုင်းထဲကို မရောက်ခင်က ကိုယ်အထင်ကြီး လေးစားတဲ့ ကမ္ဘာကျော်ကြီးတွေအကြောင်း တော်တော်ဖတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအထဲမှာ ဂျင်နရယ် ဖော့ဒ်ကားကုမ္ပဏီကြီးကို တည်ထောင်သွားတဲ့ မစ္စတာဖော့ဒ်လည်း ပါဝင်ပါတယ်။
သူပြောတဲ့ စကားတိုတိုလေး သုံးခွန်းက... ခေါင်းဆောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်....
(1) Make sure that you present.
(2) Make sure that you care about them
(3) Make sure they know that you care about them.
သင့်လူတွေ ရှိတဲ့နေရာကို သင် ရောက်နေမိပါစေ (အဝေးကချည်း လမ်းမညွှန်ပါနဲ့)။
သူတို့အပေါ် ဂရုတစိုက်၊ အလေးတယူလည်း ရှိပါ။
သင်က သူတို့ကို ဂရုတစိုက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကိုလည်း သူတို့ သိနေပါစေ တဲ့။
လေယာဉ်ပေါ်မှာ အိပ်ပျော်နေရှာတဲ့ အသက် ၇၀ အရွယ် အဖွားအိုကြီးဟာ သူ့လူတွေရှေ့မှာ ဘာမှမဖြစ်သလို ဟန်တင်းနိုင်ပေမဲ့ လူကွယ်ရာမှာတော့ ဇရာက ဇရာကပါပဲဗျာ။ မစ္စတာဖော့ဒ်ရေ လူကြီးမင်းရဲ့ ဩဝါဒတွေ သူမဆီမှာ ကျနော်တွေ့နေရပါတယ်။
အကြွင်းမဲ့အာဏာပိုင်ဆိုင်မှု (အပ်ဘဆိုလုတစ်ဇင်) ဝါဒ အကြောင်းကို ပြောကြ ရင် လူ့သဘာဝကိုပါ ပူးတွဲသုံးသပ်ပါမှ တရားမျှတတဲ့အဖြေ ထွက်မယ်လို့ ကျနော် ယုံကြည်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ တွေ့ရတဲ့ ကမ္ဘာ့ အာဏာရှင်တွေဟာ လူလတ်ပိုင်းတွေပါ။ အသက်အရွယ် ကြီးပြင်းလာပြီဆိုရင် အဲဒီ အာဏာရှင်တွေကိုယ်တိုင်တောင် သဘောထားတွေ မသိမသာ ပျော့ပြောင်းလာတတ်ပါတယ်။ ထင်ရှားတဲ့ သာဓကကတော့ ကဒါဖီပါပဲ။
အာဏာရယ်မှ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်အရာမှာမဆို အသက်လေးဆယ်ကျော် လူတစ်ယောက် ရှုမြင်ပုံနဲ့ အသက် ၇၀ ကျော် လူတစ်ယောက် ရှုမြင်ပုံဟာ တူမနေနိုင်ပါဘူး။
ဒါ့ကြောင့် အသက် ၇၀ အရွယ် အဖွားအိုကြီးဟာ သူမရဲ့ "အကြွင်းမဲ့အာဏာပိုင်ဆိုင်ရေး" အတွက် အသည်းအသန် လုပ်ယူနေတယ် ဆိုတဲ့ အယူအဆကို တစ်ယောက်ထဲဖြစ်ပါစေ ကျနော် ထိုင်ပြီးငြင်းဆန်နေ ပါရစေ။
အသက်က ၇၀၊ အဏာ ရခဲ့ရင်တောင် အချိန် ဘယ်လောက် ကျန်တော့မလဲ။ အနာဂတ် မျိုးဆက်အတွက် ပန်းပျိုးပေးထားခဲ့ချင်တဲ့ စေတနာလို့ပဲ အကြွင်းမဲ့ နားလည်၊ လက်ခံမိပါတယ်။
သဘောမတူသူများ ကျနော့်အကောင်းလေးကို ဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်နိုင်ပါပြီ။
in ဇင်ဝေသော်, ပေါ့ပေါ့ပါးပါး - on 10/19/2015 - No comments
ပြောရဦးမယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပတ်က စလုံးဒကာမ တစ်ယောက်က သူ့အိမ် ပရိတ်ရွတ် ပင့်တယ်ပေါ့။ ဒီမှာတော့ House blessing လို့ ခေါ်ကြတယ်။ သူပင့်တာက ဘုန်းဇင်နဲ့ သီဟိုဠ်ကိုယ်တော်လေး။ ဖြစ်ချင်တော့ သူပင့်တဲ့ နှစ်နာရီအချိန်မှာ သင်တန်းရှိနေတာကို မေ့ပြီး သီဟိုဠ်လေးက အိုကေ ပြောလိုက်တယ်။ သူတကယ် လာပင့်တော့ သီဟိုဠ်လေးက စာသင်ခန်းထဲမှာ။ ဖုန်းဆက်လည်း မရတော့ဘူးပေါ့။
သူက ကိုယ်တ်ေလေးကို ရန်လုပ်ရော။ ဘာ့ကြောင့် ဟိုနေ့က အိုကေ ပြောသလဲပေါ့။ အခြေအနေကို တာဝန်ရှိ ဒကာမက ရှင်းပြတယ်။ သူ့ဒေါသက ဟိုကိုယ်တော်ဆီကနေ အဲဒီ ဒကာမဆီ ကူးသွားရော။ နင်တို့က ဘာလို့ သူ့ကို ကြိုတင် ပြေမထားသလဲပေါ့။ ဒါနဲ့ လွှတ်ထားလို့တော့ မရတော့ဘူးဆိုပြီး အဲသလိုသာ ဟိုလူ့ရန်လုပ် ဒီလူ့ရန်လုပ် လုပ်နေရင် ခင်းဗျားအိမ်ကို မလိုက်နိုင်ဘူး။ တခြားကျောင်းကဘုန်းကြီးပဲ သွားပင့် ဆိုတော့မှ နှုတ်ပိတ်သွားတာ။
ဒါပေမဲ့ သူ့မှာ ကားမရှိတော့ တက္ကစီနဲ့ သွားရမှာ။ ဒါနဲ့ ဂိတ်ပေါက်ကနေ တက္ကစီ စောင့်ကြရော။ တက္ကစီက တော်တော်နဲ့မရတော့ သူ့ဒေါသက တက္ကစီတွေဆီ ရောက်သွားပြန်ရော။ သူ့ကြည့်ပြီး မနေနိုင်တာနဲ့ ကောက်ရယ်လိုက်တယ်။
သူက ရီရမလားဆိုတဲ့ သဘောနဲ့ မျက်စောင်းထိုးကြည့်တယ်။ အသံတော့ မထွက်ရဲဘူး။ အသံထွက်ရင် ဒီကလည်း တကယ် မလိုက်တော့ဘူး။
အဲ့ဒါနဲ့ ကားပေါ်ထိုင်ရင်း စဉ်းစားမိတာ။
လူတကာကို အပြစ်လိုက်မြင်နေသူတွေ ဘယ်လိုများ ပျော်ရွှင်တဲ့ ဘ၀ အရသာကို ရှာတွေ့နိုင်ကြရှာမလဲ လို့လေ။ သနားမိတယ်။
in Politics, ဇင်ဝေသော် - on 10/19/2015 - No comments
သူတို့က လက်ရှိသံအရာရှိတွေပါပဲ။ ဝါရှင်တန် မြန်မာသံရုံးက ထုတ်ပြန်တဲ့ စာဟာ အမှန်ဖြစ်နိုင်တယ်။ ကပေါက်တိကပေါက်ချာ ရွေးကော်၊ ရှင်းလင်းပြတ်သားမှု မရှိလှတဲ့ လမ်းညွှန်ချက်၊ အကန့်အသတ်နဲ့ပေးထားတဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်က တစ်ဖက်။
စောင့်ကြည့်နေတဲ့ ကမ္ဘာ၊ နိုးထနေတဲ့ ပြည်ပရောက် မြန်မာလူထု၊ တံတွေး ခိုးထွေးရင်တောင် မလွတ်တဲ့ ၂၁ ရာစု မီဒီယာက တစ်ဖက်။
သူတို့ ဒုက္ခ အကြီးအကျယ် ရောက်နေကြတယ်လို့ ယူဆရတယ်။
ကမ္ဘာ့လစ်ဘရယ် ဒီမိုကရေစီမြို့တော်၊ ဝါရှင်က သံအမတ်အနေနဲ့ ရေငုံနှုတ် ပိတ် လုပ်နေလို့ လုံးဝ မရတော့ဘူး။
တချို့ကထင်မယ်၊ သူက သံအမတ်ပဲ၊ သူလုပ်ပေးရင်ရတာပဲ လို့။ တကယ်က အဲသလို မဟုတ်နိုင်ဘူး။ သူတို့လည်း သနားစရာ၊ ရေဗူးပေါက် နဲ့ ရေခတ်နေကြရရှာတာ။ ဒါက လူသားဆန်ဆန် နားလည်ပေးမှု။
ဒါပေမဲ့ အလျှော့တော့ လုံးဝမပေးသင့်ဘူး။ သူတို့ကို ရသလောက် မူလီကြပ်ရမယ်။ ပြီးပြီးရော လုပ်လိုက်ရင် သူတို့ သက်သာသွားမယ်၊ သမိုင်းနာပြီး ကျန်ရစ်မယ်။ အဃာတ မထားရ၊ ပြတ်ပြတ်တော့လုပ်ရမယ်။
လူသားဆန်ဆန် နားလည်ပေးမှုက ဟျူမင်းနတီ၊
ကိုယ်လုပ်ရမယ့်အလုပ်ကို လုပ်တာက ဂျူတီ။
ဒီနေရာမှာ ဂျူတီကို ရှေ့တန်းတင်သင့်တယ်။
(ဒီမှာ လူကိုယ်တိုင် သက်သေအထိ လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ ကိုယ်တွေ့ကြုံလိုက်ရတဲ့ ငမှုံတွေ၊ ဒေါ်မှုံတွေရှိလို့ ဒီစာမျိုး ရေးရခြင်းပါ။)
တိုင်းရင်းသား အကိုအမတို့ ရေ
in ဇင်ဝေသော်, အမျိုးသားရေး, မောနင်း ပို့စ် - on 10/19/2015 - No comments
၁။ နာဂတောင်ပေါ်မှာ အတူတူ အလုပ်လုပ်ခဲ့ဖူး တဲ့ နာဂကြီး ဦးအနုစီး သူ့ရွာကို အပြီးပြန်သွားပြီဆိုလို့ "ဘာကြောင့်လဲ" မေးတော့ သူတို့ နာဂ ဘာသာစကား ကွယ်ပြောက်သွားမှာစိုးလို့ လူငယ်တွေကို ဘာသာစကား ပြန်သင်ပေးဖို့တဲ့။
သူတို့ နာဂ ဘာသာစကားက သူတို့ တစ်ရွာပဲ ပြောတယ်၊ သူတို့ရွာက အိမ်ခြေ သုံးဆယ်လောက်ပဲ ရှိသတဲ့။ ပျက်ရယ် မပြုကြပါနဲ့၊ လူမျိုးစု ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဟာ သူ့စီဗီလိုက်ဇေးရှင်းကို ထိန်းကိုထိန်သိမ်းရပါမယ်။
၂။ ၂၁ ရာစု ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးဆိုတာ အားကြီးတဲ့ စီဗီလိုက်ဇေးရှင်းတစ်ခုက အားသေးတဲ့ စီဗီလိုက်ဇေးရှင်းတစ်ခုကို ဝါမြိုခြင်း မဟုတ်တော့ဘူး။ အားကောင်းလာအောင် အပြန်အလှန် နားလည် ဖေးမ၊ ကူညီခြင်းပါ။
၃။ ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး ကူးပြောင်းစမှာတော့ အားသေးတဲ့ စီဗီလိုက်ဇေးရှင်းတွေဟာ တွန့်ကနဲ ခံစားကြရတတ်ပါတယ်။ သို့သော် အဲဒီ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး တည်ငြိမ်သွားရင် လက်ရှိ အာနည်းသွားတဲ့ စီဗီလိုက်ဇေးရှင်းဟာ နှစ်ဆ အားကောင်းလာပါတယ်။
၄။ တောင်ကိုရီးယားရဲ့ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးတွေ ပြောင်းတော့ လက်ရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ ကွန်ဖျူးရှပ်ဝါဒဟာ တွန့်ကနဲ ဖြစ်သွားပြီး ခရစ်ယန်ဘာသာထဲ ဝင်သူ အရေအတွက်က ကမ္ဘာ့သမိုင်းမှာတောင် သမိုင်းဝင်သွားတယ်။ ဒါပေမဲ့ တောင်ကိုရီးယားရဲ့ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး တည်ငြိမ်သွားချိန်မှာတော့ မူရင်း ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ ကွန်ဖျူးရှပ်ဝါဒက နှစ်ဆ အားပြန်ကောင်းလာတယ်။
၅။ ဒီ သီအိုရီတွေဟာ ပါမောက္ခကြီး ဆမ် ဟန်တင်တန်ရဲ့ "The Clash of Civilizations" ပါ။ ဇင်ဝေသော် ရင်ဘတ်ကြီးနဲ့ အရဲစွန့် (ဖတ်မယ့်လူမှ ရှိပါ့မလား) ဘာသာပြန်ခဲ့ရတဲ့ လူ့ယဉ်ကျေးမှု ပဋိပက္ခပါပဲ။ ကြောက်မက်ဖွယ် သူ့ သီအိုရီကြီးကလည်း ၂၁ ရာစု ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးမှာ မှန်ဆဲ၊ တိကျဆဲ၊ ငြင်းလို့မရ ဖြစ်နေဆဲပါ။ သူ့ရဲ့ "၂၁ ရာစု ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးဆိုတာ အားကြီးတဲ့ စီဗီလိုက်ဇေးရှင်းတစ်ခုက အားသေးတဲ့ စီဗီလိုက်ဇေးရှင်းတစ်ခုကို ဝါမြိုခြင်း မဟုတ်။ အားကောင်းလာအောင် အပြန်အလှန် နားလည် ဖေးမ၊ ကူညီခြင်း" သီအိုရီကို အစွန်းရောက် မွတ်စလင်တွေကလွဲရင် ပညာရှင်တိုင်း လက်ခံကြရတယ်။
၆။ ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံ တစ် နိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးပြုပြင်ရာမှာတော့ လူတွေသာမက စီဗီလိုက်ဇေးရှင်းကြီးတွေကိုယ်တိုင်လည်း ခဏတော့ အနစ်နာခံရပါသတဲ့ အကို အမတို့ရေ။
၇။ ဒီ သီအိုရီလောက်တော့ ဒေါ်စုက ကြေပြီးသားပါ။ အကို၊ အမတို့ရဲ့ စီဗီလိုက်ဇေးရှင်းကို သူမက ကြိမ်စာ မတိုက်ပါဘူး။
၈။ ကဲ ယုံကြည်ထားတဲ့ တိုင်းရင်းသားအရေးကို အထောက်အထားနဲ့တကွ ရေးလိုက်ပြီ။ လူဘယ်လောက်ဆီ ရောက်သွားမလဲ ဆိုတာကတော့ တစ်ယောက်ထဲ လုပ်လို့မရတော့ဘူး ပရိသတ်တို့ရေ၊ ကူကြပါအုံး။
Labels: ဇင်ဝေသော်, အမျိုးသားရေး, မောနင်း ပို့စ်
ဒီပုံကိုတွေ့ရင် ဒေါ်တင်တင်အောင် ဘာများ ထပ်ပြောလေမလဲ...
အဲသလောက် အဓိပ္ပါယ်မဲ့တဲ့ စာသားကတောင် အမှန်တရားလိုလိ...
သီတင်းကျွတ်ကာတွန်းပြပွဲ - junction square မှာ(27-2...
အဘိဓမ္မာမိသားစုများ စုပေါင်းကျင်းပသည့် တတိယအကြိမ်ြေ...
ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာ အစိမ်းရောင်တွေမြင်တိုင်း အဟုတ် မှတ...
ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ ဘိုနိုလို မျက်မှန်အမည်းကြီးနဲ့ ဘေ...
နိုင်ငံရေးဆိုတာကလည်း သိပ္ပံပဲမို့ သံသယဆန်တဲ့ နားနဲ့...
"ကျောင်းပိတ်ရက် မဟုတ်ပါဘဲ ကျောင်းသားလေးတွေကို ဘြာေ...
မြတ်စွာဘုရားရှင် မြန်မာပြည်တွင် မပွင့်ရသည့် အကြောင...
ကလေးတွေကို ရိုက်တဲ့ ကျောင်းအုပ်ကြီးကို အကြံပေးချင်...
ကျနော် ရေးခဲ့သမျှ စာအုပ်လေးတွေအပေါ် သံယောဇဉ်ရှိရင် ...
ဒီမှာကြည့် ဒန်ပေါက်မဲ့ ဒီ ဂျင်နရေးရှင်းရဲ့ ဒီလို ရ...
ဒန်ပေါက်စားချင်ဦးလေ အခုတော့ ဖိနပ်တောင် မစီးနိုင်ဘ...
ကဲ အရေးပေါ် ငြိမ်းချမ်းရေး စာရွက်လေး ဘာလေး ရွေးကောက...
ကာချုပ်က ပြောတယ် နိုင်ငံခြားသားများရဲ့ လွှမ်းမိုးမှု...
ဂျပန်၊ တိုကျိုသံရုံးမှာ ပေးရမယ့် မဲတွေကို အီဂျစ်ကိ...
ကျနော် လေ့လာမိတဲ့ ဈေးရောင်း ဈေးဝယ် နိုင်ငံရေး သီအိ...
ဇင်ဝေသော် (သို့) ဖိုးစိန်ဆင့်သား အငယ်ကောင်
ရွာက အိမ်ထောင်စု စာရင်း
မစ္စတာ ကစ်ဆင်းဂျားရေ၊ နိုဝင်ဘာ ၁၀ ရက်နေ့ ရောက်မှပဲ ...
ကလေးငယ်တွေရဲ့ဘဝထဲက သစ္စာလေးပါး တဲ့ကွယ်
ဆိုင်ဆိုင်၊ မဆိုင်ဆိုင် ကျနော့်ကို မဲပေးကြပါ
Heart နဲ့ Love
ဘေးအိမ်က ကလေး မပါဘူးဘုရာ့၊
ဖေ့စ်ဘုတ်က လွတ်လပ် ခွင့် ပေးထားတော့ စောင့်စည်းစရာလ...
Buddhist and Pali Collage ဒစ်ပလိုမာ သင်တန်းခွဲအသစ်...
ဇင်ဝေသော်ရယ်၊ မ,အ ဘူးများ ထင်နေသလား
မချစ်လို့ကတော့ မန်ယူရှုံးလည်း မောင်ရဲထွဋ်ကြောင့်ပဲ...
ဘဝချင်းတူလို့ ပိုယုံတယ် (၂)
မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော်ကြီး၏ ကျေးဇူးဂုဏ်များကို ပို၍ပို၍...
ပစ္စည်းတူ၊ ဈေးတူ၊ရင် ပြန်လာအားပေးပါ
ဦးတည်ရာ ညီညွတ်ရင် သာဓုလက်ခုပ်တီးရအောင်
ဒါက တို့ အနာဂတ်လေ
ဘယ်ရှုထောင့်ကကြည့်ကြည့် အငြင်းပွားစရာ မရှိတဲ့ ဆရာေ...
ပါးစပ်ရာဇဝင်လေး ဖြစ်သွားခဲ့ပြီ (သုံး)
ပါးစပ်ရာဇဝင်လေး ဖြစ်သွားခဲ့ပြီ နှစ်
ဘဝချင်းတူလို့ ပိုယုံတယ် (၁)
သိပြီးသားပေမဲ့ အခုလိုပြောချလိုက်တော့ ရှင်းသွားရော
ကြောက် ဖြုံ တီး